गन्तब्य नेपाल न्युज :: विश्व
शितलनिवासमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
नेपाल र भारतबीच उडान संख्या थपिने
सामान्य सुधारियो शेयर बजार, कारोबार रकम निरन्तर घट्दो
एकैदिन १५ जनाको मृत्यु, थप ८,०१७ जनामा कोरोना संक्रमण
भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा १ लाख ९४ हजार कोरोना संक्रमित
कोरोना संक्रमण दर बढेपछि दिल्लीमा सातामा २ दिन कर्फ्यु
म्यानमारमा सेनाको आक्रमणमा ३० जनाको मृत्यु
अष्ट्रेलियामा रहेका अफगानीहरुलाई अनिश्चितकालसम्म बस्न दिने अष्ट्रेलियाको निर्णय
म्यानमारमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर दुई प्रदर्शनकारीको मृत्यु
इरानद्धारा इराकस्थित अमेरिकी सैन्य अखडामा आक्रमण
बेलायतमा जोनसनको कन्जरभेटिभ् पार्टीलाई स्पष्ट बहुमत
सान्ना बन्ने भइन् विश्वकै कान्छी प्रधानमन्त्री
हङकङको चुनावमा आन्दोलनकारीको ‘क्लिन स्वीप’
न्युजिल्याण्डमा भूकम्प, हजारौ विस्थापित
चीनले सन् २०३० सम्ममा ६ जी नेटवर्क ल्याउने
अस्ट्रेलियाको सिड्नी धुवाँले ढाकियो
हङकङका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीद्वारा गोली प्रहार
इराकमा सरकार विरोधी प्रदर्शन, प्रहरीले गोली चलायो
नयाँ दिल्लीमा बढ्दो प्रदुषणले थप समस्या
जापानको ५०० वर्ष पुरानो राजदरबारमा भिषण आगलागी
पाकिस्तानको रावलपिण्डीमा गुडिरहेको रेलमा आगलागी, ४६ जनाको मृत्यु
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानको राजीनामा माग गर्दै पदर्शन
जापानी व्यापारमन्त्री सुगावाराको राजीनामा, मतदातालाई गंगटा र पैसा दिन खोजेको आरोप
हङकङको विवादित सुपुर्दगी विधेयक औपचारिक रुपमा फिर्ता
‘खुसी जनता–स्मार्ट सिटी’ अभियानः सबै ट्याक्सीमा सिसी क्यामेरा जडान
जापानमा आँधीबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ७७ पुग्यो
इण्डोनेसियामा ३४ औ व्यापार मेला सुरु, कार्तिक ३ गते सम्म चल्ने
उत्तर कोरियाली नेता किम जङ–अन घोडा चढेर हिमालको टुप्पामा
हिमाली शिखर छिचोल्दै नेपाल पुग्नेछ चिनियाँ रेल
जापानमा शक्तिशाली समुद्री आँधीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ५६ पुग्यो
अमेरिकालाई पछि पार्दै सिंगापूर बन्यो विश्वको सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र
चीनको ७० औं वर्षगाँठमा माओकै जस्तो पोशाकमा देखिए सी
फिलिपिन्समा शक्तिशाली भूकम्पको धक्का
रुसद्वारा २ सयभन्दा बढी उत्तर कोरियाली पक्राउ
इण्डोनेसियामा शक्तिशाली भूकम्प
पाकिस्तानमा बस दुर्घटना, २६ को मृत्यु, १२ घाइते
ड्रोन आक्रमणमा १८ सर्वसाधारणको मृत्यु
दक्षिण अफगानिस्तानमा आक्रमण दशको मृत्यु
ब्राजिलः हरेक घण्टा १३ वर्ष मुनिका ४ किशोरीमाथि उत्पीडन, दुई मिनेटमा एउटा मुद्दा दर्ता
अवैध आप्रवासीलाई निकाल्ने भारतीय गृहमन्त्रीको घोषणा
अमेरिका–उत्तर कोरिया वार्ता अन्योलः किमलाई के जवाफ दिए ट्रम्पले ?
साउदीका दुई तेल प्लान्टमा ड्रोन आक्रमण, सोमबारदेखि तेलको भाउ बढ्न सक्ने
५५ वर्ष लागेसँगै ज्याक माले दिए अलिबाबाबाट राजीनामा
क्यालिफोर्नियामा डुङ्गामा आगलागी हुँदा २५ को मृत्यु
व्यापार युद्धले चीनमा ३० लाख नोकरी गएकै हुन् त ?
‘लोकतन्त्रको रक्षा गर’ भन्दै बेलायती प्रधानमन्त्री विरुद्ध हजारौंको प्रदर्शन
अमेरिकामा गोलीकाण्डः पाँचको मृत्यु, २१ घाइते
चीनको हेनानमा आँधीबाट आठ जनाको मृत्यु
बेलायती प्रधानमन्त्रीले गरे संसद निलम्बनको घोषणा, सांसद र जनताद्वारा विरोध
किन आक्रोशित बने फ्रान्सका राष्ट्रपतिसँग ब्राजिलका राष्ट्रपति ?
स्पेनमा आकाशमा हेलिकप्टर र विमान जुधे, सातको मृत्यु
बर्षा र बाढीबाट सुडानमा ५४ को मृत्यु, २ लाख प्रभावित
अफगान सेनाले गरेको हवाई कारबाहीमा बीस तालिबानको मृत्यु
२०२१ मा अमेरिमा आर्थिक मन्दी
लाओसमा पर्यटक बस दुर्घटनाग्रस्त, १३ चिनियाँ पर्यटकको मृत्यु
कस्मिरमा १५ दिनपछि विद्यालय खुले, त्रासले विद्यार्थी स्कुलै गएनन्
काश्मिरबारे विशेष व्यवस्था खारेजीपछि चार हजार पक्राउः सरकारी स्रोत
विवाह समारोहमा बम बिस्फोट, ६३ को मृत्यु, १८२ घाइते
अन्तिम गोली र अन्तिम सेना रहुन्जेल भारतसँग लड्छौँः पाकिस्तान
कश्मीरमा आन्दोलन, चीनको आँधीदेखि उत्तर कोरियाको क्षेप्यास्त्रसम्म
भारतमा बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १ सय ८४ पुग्यो, दश लाख विस्थापित
हङ्‍कङ विमानस्थल पाचौं दिन पनि प्रदर्शनकारीको कब्जामै,प्रहरी भेष बदलेर प्रदर्शनकारीसँगै घुसे
व्यापार युद्धले घट्यो चीनको आर्थिक वृद्धिदर
चीनमा शक्तिशाली समुन्द्री आँधी, मृतकको संख्या २२ पुग्यो, १० बेपत्ता
उत्तर कोरियाले फेरि हान्यो दुई क्षेप्यास्त्र
जम्मू–काश्मीरलाई भारतले केन्द्र प्रशासित प्रदेश बनाएसँगै विश्वको ध्यान भारततर्फ
श्रीनगरमा धारा १४४ लागू, शीर्ष नेता नजरबन्दमा
अमेरिकामा गोलीकाण्ड, ९ जनाको मृत्यु, १६ घाइते
कोरिया–जापान व्यापार संकट, दुबै देशबीच आरोप–प्रत्यारोप
ओसामा बिन लादेनका छोरा मारिएको दाबी
अस्ट्रेलियामा नेपाली संस्कृति एवम् परिकार महोत्सव भव्यताका साथ सम्पन्न
नाइजेरियामा अन्धाधुन्द गोली चल्दा ६५ जनाको मृत्यु
जम्मू कश्मिरमा १० हजार अर्धसैनिक बल
भारतको १३२ गाउँमा छोरी नै जन्मिएनन्
फिलिपिन्समा भूकम्प, ८ जनाको मृत्यु
नाइजेरियामा ७८ मारिए
निशानको संचालन नाफामा ९० प्रतिशत गिरावट, १० हजार भन्दा बढी कामदार हटाउने घोषणा
हवाइ आक्रमणमा समूह कमाण्डरसहित तीनको मृत्यु
जब उड्न लागेको विमानको पखेटामा मान्छे दौडिए.........
भारतका दुई राज्यमा चट्याङले २४ घण्टाभित्र ३६ को मृत्यु
अमेरिका न मेरो हो, न ट्रम्पको हो, हामी सबैको हो ः मिशेल ओबामा
जापानी दूतावास बाहिर कोरियाली वृद्धले आफैँलाई आगो लगाएर गरे आत्महत्या
जापनको एक एनिमेसन स्टुडियोमा आगजनी, २३ को मृत्यु
युरोपेली आयोगको पहिलो महिला अध्यक्षमा उर्सुला लियेन
पञ्जावमा छोरीलाई नर्सरीदेखि पिएचडीसम्मै निःशुल्क
ट्रम्पबिरुद्ध खेदप्रश्ताब पारित, नश्लीय टिप्पणी गरेको आरोप
ट्रम्प र चार महिला सांसदबीच आरोप प्रत्यारोप
डुबानमा वासिङ्गटन डिसी, ह्वाइट हाउसमा भेल पस्यो
असार २४, वासिङ्गटन डिसी । अमेरिकाको राजधानी वासिङ्गटन डिसी भारी वर्षापछिको बाढीले डुबानमा परेको छ ।
पाकिस्तानले हवाई क्षेत्र बन्द गर्दा भारतीय विमान कम्पनीलाई ५४८ करोड भारुभन्दा बढी घाटा
असार २०, नयाँ दिल्ली । बालाकोटमा भारतीय वायुसेनाले हवाई हमला गरेपछि पाकिस्तानले आफ्नो हवाई क्षेत्र बन्द गरेको छ ।
अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा दुई दसकयताकै शक्तिशाली भूकम्प
असार २०, काठमाडौं । दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा दुई दसकयताकै शक्तिशाली भूकम्पका कारण केही क्षति पुगेको विवरण प्राप्त भएका छन्। मानिसहरूमा भूकम्पका त्रास कायमै छ।
लिबियाको आप्रवासी केन्द्रमा हवाइ आक्रमण, ४० जना मारिए
अमेरिका चिन व्यापार युद्ध रोकियो, हुवावेमाथिको प्रतिबन्ध फकुवा
अमेरिकी व्यापार युद्धको अर्को पाटो :भारत माथि थप्यो कर
अमेरिका–चिन व्यापार युद्ध उत्कर्षमा, राष्ट्रपति सीले भने,–‘अमेरिका सँग नझुक्नु’
ईजरायल प्यालेष्टाईन तनाब : गाँजापट्टिमा आक्रमण, लडाकुसहित ४ प्यालेस्टाईन मारिए
बेलायती रक्षा मन्त्री बर्खास्त, गोप्य सूचना चुहाएको आरोप
थाई नरेशको बिलासी जिबन, अंगरक्षक सुथिदासँग चौथो बिवाह
श्रीलंका बम बिस्फोट अपडेट :मृतकको संख्या २९० पुग्यो, घटनाको जिम्मेवारी कसैले लिएन
श्रीलंकामा श्रृंखलाबद्ध बिष्फोटमा २० जनाको मृत्यु, कयौ घाईते
८ वैशाख, काठमाडौं । श्रीलंकामा भएका श्रृंखलावद्ध बम विष्फोटमा कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको छ । २ सय जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् ।
इसाई धर्मावलम्बीहरुले इस्टर पर्व मनाइरहेका बेला चर्च र होटलहरुमा श्रृंखलावद्ध विस्फोट भएको थियो ।
फ्रान्सको बिश्व संपदा सुचीकृत नोट्र ड्याम खरानी भयो
सुडानी सरकारका पूर्वसदस्य पक्राउ, प्रेसमाथिको प्रतिवन्ध हट्यो
२ वैशाख, काठमाडौं । सुडानको संक्रमणकालीन मिलिटरी काउन्सिलले अपदस्थ सरकारका सदस्यहरुलाई गिरफ्तार गरेको छ ।
सुडानमा सैन्य ‘कु’ पछि राजनीतिक घटनाक्रम फेरबदल भइरहेका बेला पूर्ववर्ती सरकारका सदस्य गिरफ्तारीमा परेका हुन् । नियन्त्रणमा लिइएकाहरुलाई कहाँ राखिएको छ भन्नेबारे खुलाइएको छैन । यद्यपि, उनीहरु सुरक्षित स्थानमा रहेको काउन्सिलले जनाएको छ ।
अष्ट्रेलियामा आगामी मे मा आम चुनाबको घोषणा
२८ चैत, काठमाडौं । अस्ट्रेलियामा आमनिर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ । अस्ट्रेलियन प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले मे १८ का लागि आमनिर्वाचन घोषणा गरेका हुन् ।
मोरिसनले बिहीबार निर्वाचन मिति घोषणा गर्दै मे १८ मा अस्ट्रेलियनहरूले मतदान गर्ने बताएका छन् ।
अस्ट्रेलियामा हाल कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकार छ । सत्तारुढ दल कन्जरभेटिभ र बिल सर्टनले नेतृत्व गरेको लेबर पार्टीबीच आसन्न निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुने ठानिएको छ ।
भाजपालाई भोट नहाल्न ६ सय कलाकारले गरे अपिल
चैत्र २४, काठमाण्डौ । भारतका ६ सय बढी कलाकारहरूले भारतमा हुन गइरहेको आगामी चुनावमा सत्तासीन भारतिय जनता पार्टी (भाजपा)लाई भोट नहाल्न अपिल गरेका छन् ।
उनीहरूले ‘समानता तथा सामाजिक न्यायका लागि अन्धकार एवं जंगलीपनाका शक्तिलाई पराजित गर्न’ भन्दै भाजपा विरोधी आव्हान गरेका हुन ।
बेलायत ईयुबाट बाहिरीने समयअवधी बढाउन संसदको अनुमति
२१ चैत, काठमाडौं । युरोपेली युनियनबाट ब्रिटेनको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट)लाई लिएर संसदमा जारी गतिरोध अन्त्यको प्रयास लण्डनमा भइरहेको छ ।
हाउस अफ कमन्समा सांसदहरुले केबल एक मतको बहुमतबाट ब्रेक्जिटको समयसीमा बढाउने पक्षमा मतदान गरेका छन् ।
मोदी आजबाट चुनावी अभियानमा, पहिलो सम्बोधन जम्मु काश्मिरबाट
१४ चैत, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबारदेखि चुनावी प्रचार अभियान थाल्ने भएका छन् ।
मोदीको घोषणा :भारत अन्तरिक्ष ‘महाशक्ति’ बन्यो
१३ चैत, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत अन्तरिक्ष महाशक्ति बनेको घोषणा गरेका छन् । देशवासीका नाममा सम्वोधन गर्दै उनले रुस, अमेरिका र चीनपछि आफ्नो देश यो स्थानमा आएको दावी गरे ।
सम्वोधनमा मोदीले भने, ‘केही समय अगाडि मात्रै भारतले एउटा अभूतपूर्व उपलब्धी हासिल गरेको छ । भारतले आफ्नो नाम अन्तरिक्ष महाशक्तिको रुपमा दर्ता गर्यो । संसारका तीन देश अमेरिका, रुस र चीनले मात्रै यो उपलब्धी हासिल गरेका छन् र अब भारत यसमा थपिएको छ ।’
रुष्ट अफगानिस्तानले पाकिस्तानबाट राजदूत फिर्ता फिर्ता बोलायो
१३ चैत, काठमाडौं । अफगानिस्तानले पाकिस्तानबाट आफ्नो राजदूत फिर्ता बोलाएको छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले दिएको एक अभिव्यक्तिबाट रुष्ट अफगानिस्तानले आफ्नो राजदूत फिर्ता बोलाएको हो ।
इमरान खानले हालै अफगानिस्तानमा अन्तरिम सरकार गठन हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । अफगानिस्तानले खानको यो अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवार भनेको छ ।
बीबीसीका अनुसार इमरान खानले अफगानिस्तानमा अन्तरिम सरकार बनेमा अमेरिका र तालिबान समूहबीच वार्ताले गति लिने बताएका थिए ।
फ्रान्स र चीनबीच ४० खर्बको व्यापार सम्झौता
७ चैत्र, उधमपुर । भारत नियन्त्रित जम्मु–काश्मिरमा खटिएका तीन जना सशस्त्र फौज (सीआरपीएफ) का जवानको आफ्नै साथीले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भएको छ । साथीलाई गोली हान्ने जवानले पनि आफैंले आफूमाथि गोली चलाएका थिए ।
कोहली चलाख र रणनीतिक कप्तान होइनन्
७ चैत्र, नयाँ दिल्ली । भारतीय ब्याट्सम्यान गौतम गंभीरले भारतीय टोलीका कप्तान एवम् ब्याटसम्यान विराट कोहली चलाख कप्तान नभएको बयान दिएका छन्। उनले विराटको तुलना पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी तथा उपकप्तान रोहित शर्मासँग तुलना गर्न नसकिने बताएका छन्।
फिनल्याण्ड संसारकै खुशी देश, नेपाल १ सय, भारत १४० औ स्थानमा
चैत ७, काठमाडौं । फिनल्याण्ड संसारकै सबैभन्दा खुशी हुने देशमा परेको छ । फिनल्याण्डले ७.७६ अंक पाएको छ । फिनल्याण्ड पछिल्लो तीन वर्ष यता लगातार पहिलो स्थानमा पर्दै आएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार दोस्रो खुशी हुने देशमा डेनमार्क, तेस्रोमा नर्वे, चौथोमा आइसल्याण्ड, पाँचौमा नेदरल्याण्डस्, छैठौंमा स्विटजरल्याण्ड, सातौंमा स्विडेन, आठौंमा न्यूजल्याण्ड, नवौंमा क्यानडा र दशौंमा अस्ट्रेलिया छ ।
नेपाल विश्वमा १०० औं खुशी हुने देशमा परेको छ । बुधबार सार्वजनिक वल्र्ड हेप्पीनेस रिर्पोट अनुसार १५६ देश मध्ये नेपालीहरू १०० औं स्थानमा परेको हो ।
न्यूजिल्याण्डमा ११ अप्रिलबाट बन्दुक प्रतिवन्ध
७ चैत, काठमाडौं । बन्दुकधारीको आक्रमणबाट क्राइस्टचर्चमा ५० जनाको ज्यान गएपछि न्यूजिल्यान्डले आफ्नो विद्यमान बन्दुकसम्बन्धी कानुन परिवर्तन गर्ने भएको छ ।
क्राइस्टचर्च शहरका २ मस्जिदमा गत शुक्रबार ५० जनाको ज्यान जाने गरी बन्दुकधारीले आक्रमण गरेपछि न्यूजिल्यान्डमा बन्दुक कानुनबारे बहस चलेको छ । अधिकांशले विद्यमान कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने मत जायर गरिरहेका छन् ।
भारतीय अर्बपति मुकेश अम्बानीले तिरिदिए भाइको ८ अर्ब ऋण
५ चैत्र, नयाँ दिल्ली । भारतीय अर्बपति मुकेश अम्बानीले अन्तिम समयमा आफ्ना भाइ अनिल अम्बानीलाई जेल जानबाट जोगाएका छन्।
विश्वको सबैभन्दा महँगो सहर पेरिस
एजेन्सी । इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट सर्भेले भर्खरै गरेको एक सर्भेक्षणमा विश्वको सबैभन्दा महँगो सहर पेरिस देखिएको छ।
श्रीलङ्कामा भ्रष्टाचारविरुद्ध पाँच बर्षे अभियान सुरु
५ चैत्र, कोलम्बो । श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले सोमबार भ्रष्टाचार विरुद्धको पाँच बर्षे अभियानको सुरु गरेका छन् । । आगामी सन् २०२३ सम्ममा देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने उद्देश्यले कार्य योजनासहित अभियान सुरु गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । अभियान अन्तर्गत दोषीलाई कानूनी कारबाहीका प्रक्रियाहरु आक्रामक रूपमा अगाडि बढाइने सिरिसेनाले शुभारम्भ कार्यक्रममा बताए ।
केही सेकेण्डले विमान दुर्घटना हुनबाट जोगियो
४ चैत्र, मुम्बई । मुम्बईमा ठूलो हवाई दुर्घटना हुनबाट जोगिएको छ । गएको शुक्रबार अपरान्ह दुई अन्तर्राष्ट्रिय उडान खतरनाक रुपमा एकअर्कासँग ठोक्किनबाट केही सेकेण्डले जोगिएको हो ।
इथियोपिया विमान दुर्घटनाः ज्यान गुमाउनेहरूको अवशेष चिन्न ६ महिना लाग्ने, आफन्तलाई दुर्घटनास्थ
३ चैत्र, इथियोपिया । इथियोपियन एअरलाइन्सले गत हप्ता दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएका १५७ जनाको अन्तिम संस्कार उनीहरूका परिवारजनलाई दुर्घटनास्थलबाट सङ्कलित डढेको माटो दिन लागेको विवरण प्राप्त भएको छ।
न्युजिल्याण्डका २ मस्जिदमा बन्दुकधारीको आक्रमण
एजेन्सी । न्युजिल्याण्डस्थित सेन्ट्रल क्राइस्ट चर्च शहरका दुईवटा मस्जिदमा आक्रमण भएको छ। उक्त बन्दुक आक्रमणमा कैयौं मानिसको मृत्यु भएको न्युजिल्याण्डका उच्च प्रहरी अधिकारी माइक बुशले जनाएका छन्।
न्यूजिल्याण्डको मस्जिदमा आक्रमण, क्षतिको बिवरण आउन बाँकी
चैत १, काठमाडौं । न्यूजिल्याण्डको क्राइस्टचर्चमा अवस्थित दुई वटा मस्जिदमा अज्ञात समूहले आक्रमण गरेको छ । मस्जिदमा अन्धाधुन्द गोली प्रहार हुँदा ‘धेरै हताहत’ भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
डेली मेलका अनुसार यो घटनामा बालबालिकासहित कम्तिमा २७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
बेलायत इयूबाट बाहिरिने सम्झौता ब्रेग्जिट दोस्रोपटक अस्विकार
२९ फागुन, काठमाडौं । ब्रिटेनको संसदले प्रधानमन्त्री टेरेजा मे ले पेश गरेको युरोपेली संघ (ईयू) बाट बाहिरिने सम्झौता (ब्रेग्जिट) दोस्रोपटक अस्वीकार गरेको छ ।
ब्रग्जिट मुद्दामा प्रधानमन्त्री मेको एउटा अर्को ठूलो हार हो । यसअघि जनवरीमा पनि उनको प्रस्ताव संसदले अस्वीकृत गरेको थियो । योपटक सम्झौताको विपक्षमा झन बढी मत परेको बीबीसीले जनाएको छ । संशोधित मस्यौदाको पक्षमा २४२ मत परेको छ भने विपक्षमा ३९१ मत परेको छ ।
बोइङ म्याक्स ७३७ विमान उडाउन सिंगापुरले लगायो रोक
२८ फागुन, सिंगापुर । सिंगापुरको वायु सेवा निगमले बोइङ म्याक्स ७३७ मोडेलको विमान अर्को सूचना नआएसम्मका लागि उडान नगर्न आदेश दिएको छ। सिंगापुरले बोइङको सूरक्षा प्रणालीमा प्रश्न उठाउँदै हाललाई म्याक्स मोडेलको सबै विमानमा प्रतिबन्ध लगाएको हो।
दुईवटा दुर्घटना भएपछि बोइङ ७३७ म्याक्स तत्काल नउडाउन चिनियाँ अधिकारीको निर्देशन
२७ फागुन, वासिङ्टन । चीनले आन्तरिक एयरलाइन्स कम्पनीहरुलाई बोइङ ७३७ म्याक्स ८ मोडेलका विमानहरुको व्यापारिक, व्यावसायिक उडान तत्काल स्थगन गर्न निर्देशन दिएको छ । यही मोडेलका दुई वटा विमान ६ महिनाको अन्तरालमा उड्नासाथ दुर्घटनाग्रस्त भएपछि चीनले यो कदम चालेको हो ।
इथियोपियामा विमान दुर्घटना भएपछि चीनले लगायो बोइंग ७३७ म्याक्स ८ को उडानमा रोक
इथियोपिया बोइंग ७३७ म्याक्स ८ विमान दुर्घटना भएपछि चीनले बोइंग ७३७ म्याक्स ८ को व्यवसायिक उडान बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच तेस्रो शिखर वार्ताको तयारी
२७ फागुन, काठमाडौं । अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच तेस्रो शिखर वार्ताको तयारी भइरहेको एक अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन् । ह्वाइटहाउसका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले उत्तर कोरियासँग तेस्रो पटक वार्ताको तयारीबारे बताएका हुन् ।
ट्रम्प–किम शिखर बार्ताको तयारी
१३ औं चिनियाँ जनकांग्रेस जारी, वैदेशिक लगानी मजबुत बनाउने राष्ट्रपति सी को भनाई
२६ फागुन, काठमाडौं । चीनले वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नयाँ नीति तर्जुमा गरेको छ । यसै वर्षभित्र परिमाणलाई स्थिर पार्ने, गुणस्तरलाई माथि उकास्ने र शक्ति सुधार गर्ने जस्ता तीनवटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तर्जुमा गरिएको छ ।
वैदेशिक व्यापारको स्थिरताका साथ गुणस्तरको वृद्धिलाई अघि बढाउने उद्देश्यले तयार पारिएको नयाँ कानुनको मस्यौदा तेह्रौं राष्ट्रिय जनकांग्रेसको दोस्रो अधिवेशनमा पेश भएको छ ।
निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको प्राईम टेलिभिजन प्रसारणमा रोक
जाम्बिया । टेलिभिजन प्रसारण अनुगमन सम्वन्धी निकाय “स्वतन्त्र प्रसारण प्राधिकरण”ले सोमबार जाम्बियाको एउटा टेलिभिजनको प्रसारणमा रोक लगाएको छ ।
इमरानले भने– ‘नोबेल पुरस्कारका लागि म योग्य छैन, कश्मीर विवाद अन्त्य गर्न सक्नेले पाउनुपर्छ’
एजेन्सी । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिनुपर्ने कुरा उठिरहँदा उनी आफैँले भने सो पुरस्कारका लागि आफू योग्य नरहेको बताएका छन् ।
अमेरिकामा टोर्नाडो आँधीः १४ जनाको मृत्यु
एजेन्सी । अमेरिकामा आएको आँधीको कारण १४ जनाको मृत्यु भएको छ । अमेरिकाको अलाबाको ली जिल्लामा आएको टोर्नाडो आँधीका कारण १४ जनाको मृत्यु भएको हो ।
मुसलधारे वर्षासँगै आएको बाढीले कम्तिमा ६ जनाको मृत्यु
एजेन्सी । बालुचिस्तानमा मुसलधारे पानी र कतिपय उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपात समेत भएका कारण यहाँको सामान्य जनजीवन प्रभावित बनेको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।
किमले गरे हो चि मिन्हको सम्मान
हनोई । भियतनामका क्रान्तिकारी नेता हो चि मिन्हप्रति उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले सम्मान व्यक्त गरेका छन्। भियतनाममा रहेका उनले भियतनामका स्वतन्त्रतावादी तथा क्रान्तिकारी नेता मिन्हप्रति शनिबार श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गरेका हुन्।
दुवई टेनिस च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा पुगे फेडेरर
एजेन्सी । विश्व चर्चीत टेनिस खेलाडी रोजर फेडेररले दुवई टेनिस च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका छन् । बिहीबार राति भएको क्वाटरफाइनल खेलमा फेडेररले मार्टन फुक्सोभिक्सलाई पराजित गर्दै जित नजिक पुगेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी ट्रम्पको निजी रिसोर्ट जाँदै, चर्किदो व्यापार युद्ध अन्त्यको खोजी
काठमाण्डौ । बिश्वका शक्ति राष्ट्रमध्ये अमेरिका र चिनको शितयुद्ध बिगतदेखी नै जारी छ । बिशेषतः आर्थिक शक्तिमा कसले पकड बनाई राख्ने भन्नेमा यि दुई देशबिच व्यापार युद्ध चर्किने गरेको छ ।
यहीबेला आर्थिक मुद्धाको किचलो हटाउने उपायको खोजी स्वरुप अहिलेसम्म भएका वार्ताको निष्कर्ष निकाल्न चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ यही महिनाको अन्त्यमा अमेरिका जाँदैछन ।
सहमतिबिनै सकियो ट्रम्प–किम वार्ता, पत्रकार सम्मेलन रद्द
एजेन्सी । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच भियतनामको हनोइमा भएको दोस्रो शिखर सम्मेलनले अपेक्षा गरिए अनुसारको नतिजा ल्याउन नसकेको बताइएको छ । अघिल्लो वर्षको ऐतिहासिक बैठकमा दुवैले उत्तर कोरियाको निशस्त्रीकरण प्रक्रियाबारे सहमतिमा आउँदै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर एक वर्ष बित्न लाग्दा समेत सो विषयमा कुनै प्रगति नभएपछि दुवै प्रमुखहरुबीच विस्तृत छलफलका लागि दोस्रो भेटवार्ता आयोजना गरिएको थियो ।
पछि हट्दै भारत–पाकिस्तान
एजेन्सी । दुई दिनदेखि भारत र पाकिस्तानबीच देखिएको युद्धको स्थिति बिस्तारै मत्थर हुन थालेको संकेतहरू देखिएका छन्।
तीन पाकिस्तानी लडाकु विमान भारतमा प्रवेश
काश्मिर । पाकिस्तानी लडाकु विमान भारतको हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि भारतीय र पाकिस्तानी जेट आमने सामने भएका छन् । पाकिस्तानले पनि भारतमा आक्रमण गरेको पुष्टि गरेको छ । तर, आफ्नो जेटले सीमा पार नगरेको र कुनै पनि मानविय क्षती नभएको पाकिस्तानले जनाएको छ । तीन पाकिस्तानी लडाकु विमानले भारत नियन्त्रित हवाई क्षेत्र पार गरेपछि भारतीय सेनाले रोकेको रोयटर्सले जनाएको छ ।
भारत–पाकिस्तानबीच हुने युद्धले समाधान गर्छ त ‘कश्मिर समस्या’ ?
एजेन्सी । फेब्रुअरी १४ मा भारत प्रशासित कश्मिरको पुलवा जिल्लामा अर्ध–सैनिक प्रहरी बल (सीआरपीएफ ) को गाडीमा आत्मघाती आक्रमण भयो । आक्रमणमा ४० सीआरपीएफ जवानहरुको मृत्यु भयो ।
भारतको वायुसेनाले पाकिस्तानमा बम हमला
एजेन्सी । भारतको वायुसेनाले पाकिस्तानमा बम हमला गरेको पाकिस्तानले दाबी गरेको कुरा भारतीय समाचार माध्यमले जनाएका छन् । पुलवामामा भएको आतंकारी हमलामा ४० भारतीय सेनाले ज्यान गुमाएको थियो । अहिले भारत पाकिस्तानबीच निकै खलबल मच्चिएको छ ।
ओस्कार अवार्डः सर्वोत्कृष्ट चलचित्र ‘ग्रिन बुक’
विश्वको चर्चित ओस्कार अवार्ड अन्तर्गत सवोत्कृष्ट चलचित्रको अवार्ड ‘ग्रिन बुक’ ले हात पारेको छ । अहिले जारी अवार्डमा अमेरिकी चलचित्र ‘ग्रिन बुक’ लाई सर्वोत्कृष्ट चलचित्रको अवार्ड प्रदान गरिएको हो ।
राजकुमारी रीमा साउदीकी पहिलो महिला राजदूत
एजेन्सी । साउदी अरेबियाले पहिलो पटक महिलालाई राजदूत नियुक्त गरेको छ। राजकुमारी रीमा बिन्ट बन्डार अल साउद अमेरिकाका लागि नयाँ राजदूत नियुक्त भएकी छन्।
फेब्रुअरी २७ र २८ गते हुने दोस्रो शिखर वार्ताका लागि हरियो रेल चढेर भियतनाम हिँडे किम
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग हुने दोस्रो शिखर वार्ताका लागि उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन भियतनाम हिँडेका छन्।
ट्रम्पको संकटकालविरूद्ध १६ अमेरिकी राज्य अदालतमा
एजेन्सी । क्यालिफोर्नियालगायत १६ वटा अमेरिकी राज्यले मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल बनाउन संकटकाल घोषणा गर्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कदमविरूद्ध अदालतमा मुद्दा हालेका छन्।
जम्मु कस्मिरमा फेरि गोली हानाहान, ४ जना सैनिक मारिए
एजेन्सी । भारत स्वशासित क्षेत्र जम्मुकस्मिरमा फेरि गोली हानाहान भएको छ। गोली हानाहानमा चारजना भारतीय सेना मारिएका छन् भने एक जना घाइते भएका छन्। पुलवा जिल्लामा विद्रोहीहरु लुकेर बसेको भन्ने सूचनाको आधारमा सैनिक त्यसतर्फ गएको थियो।
स्पेनका प्रधानमन्त्रीद्वारा निर्वाचन घोषणा
एजेन्सी । संसद्बाट बजेट पारित नभएपछि स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री सान्चेजले आगामी २८ अप्रिलका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
अमेरिकामा आपतकाल लगाउँदै राष्ट्रपति ट्रम्प
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल बनाउन आवश्यक बजेट जोहो गर्न आपतकाल घोषणा गर्ने भएका छन्।
रेनल्टले रोक्यो पूर्व कार्यकारी प्रमुख कार्लोसको भूक्तानी
एजेन्सी । फ्रान्सको बहुराष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त कार कम्पनी रेनल्टले उसका पूर्व कार्यकारी प्रमुख कार्लोस गोउनको भूक्तानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीले आफ्ना पूर्व प्रमुखको दिन बाँकी देखिएको दुई वर्षको भूक्तानीलाई उनको नियुक्ति करारमा रहेको गैर–प्रतिस्पर्धी धाराअन्तर्गत तलबको दुई वर्ष बराबरको भूक्तानी रोक्ने निर्णय रेनल्टको सञ्चालक समितिको निर्णयबाट भएको बुधबार कम्पनीले जनाएको छ।
२७ फेब्रुअरीमा ट्रम्प–किमको दोस्रो शिखर वार्ता
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ्ग उनसँगको दोस्रो वार्ता यसै महिनामा हुने घोषणा गरेका छन् । ट्रम्पले यही फेब्रुअरी २७ र २८ तारिखमा भियतनाममा किमसँग भेटवार्ता हुने जानकारी दिएका हुन् ।
भेनेजुयलामा हस्तक्षेप गरे ट्रम्प रक्तरंजित हात लिएर सत्ताबाट बाहिरिनेछन्ः मदुरो
एजेन्सी । भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो देशमा हस्तक्षेप गरे रक्ताम्य हात लिएर ह्वाइट हाउस छाड्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएका छन्। स्पेनको एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वाता दिँदै मदुरोले आफ्नो देश गृहयुद्धमा होमिने वा नहोमिने विषय अमेरिका र उसका मित्रशक्तिका क्रियाकलापमा निर्भर रहने समेत बताएका छन्।
जापानको श्रम बजारमा कामदार अभाव
टोक्यो । जापानमा गएको वर्ष औसतमा हरेक १०० जना रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिका लागि १६१ वटा रोजगार उपलब्ध थिए ।
आयोजक युएईलाई हराउँदै कतार पहिलो पटक एसियन कपको फाइनलमा
दुबई । घरेलु टोली युएईलाई हराउँदै कतार एसियन कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
अमेरिका–मेक्सिको सीमाः ५ अर्ब ७० करोड डलरमा करिब ३२० किलोमिटर लामो पर्खाल
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले ५ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर खर्चेर मेक्सिकोसँगको सीमामा करिब ३२० किलोमिटर लामो मजबूत पर्खाल बनाउन चाहन्छ । तर, पर्खाल मात्रै आप्रबासीलाई अमेरिका प्रवेशमा बाधक बन्ने देखिदैन । हरेक महिना अवैधरुपमा हजारौं मानिस मेक्सिको हुँदा अमेरिका प्रवेश गरिरहेका छन् ।
हुवावेकी मेङ पक्राउ प्रकरणमा क्यानडेली राजदूत बर्खास्त
टोरन्टो । चिनियाँ टेलिकम कम्पनी हुवावेकी प्रमुख आर्थिक अधिकृत सरविना मेङ वानजाउ पक्राउ प्रकरणमा चीनका लागि क्यानडाका राजदूत बर्खास्त भएका छन्।
भेनेजुएलाका राष्ट्रपति मदुरोलाई सेनाको समर्थन
काराकास । भेनेजुएलाको शक्तिशाली सेनाले बिहीबार राष्ट्रपति निकोलास मदुरोलाई पूर्ण समर्थन गरेको जनाएको छ । अमेरिका समर्थित विपक्षी नेता हुँवा गुएइदोले आफू नै भेनेजुएलाको अख्तियारप्राप्त अन्तरिम राष्ट्रपति रहेको दाबी गरिरहेका छन् ।
आगामी डेढ दशकभित्र चीनले विमानस्थलको संख्या ४ सय ५० पुर्‍याउने
बेइजिङ । चीनले आगामी डेढ दशकभित्र विमानस्थलको संख्या बढाएर ४ सय ५० पुर्‍याउने नयाँ तथ्यांक प्रक्षेपण गरेको छ । यो हाल रहेका विमानस्थलको संख्याभन्दा दोब्बर बढी हो ।
बोइङले गर्‍यो उड्ने कारको परीक्षण
काठमाडौं । जहाज निर्माता कम्पनी बोइङले उड्ने कारको सफल परीक्षण उडान गरेको छ।
राष्ट्रपतिलाई अनुगमन गर्ने समितिमा ट्रम्पका प्रखर विरोधी
वाशिङटन । अमेरिकी संसदको शक्तिशाली समितिमा पर्ने ओभरसाइट कमिटी ९निरीक्षण समिति०मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका प्रखर विरोधीका रुपमा चिनिएका सांसदहरु छनौट भएका छन् । यसरी छानिनेमा डेमोक्र्याट तथा सबैभन्दा कान्छी सांसद अलेक्जान्द्रिया ओकासियो कोर्टेजदेखि हालै ट्रम्पलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ भनेर अश्लिल गाली गर्ने सांसद रसिदा तलिब सम्म रहेका छन् ।
२०१८ मा १.४ अर्ब अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक
वासिङटन । गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनका लागि राम्रो वर्ष भएको संयुक्त राष्ट्र संघिय विश्व पर्यटन संगठनको नयाँ प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
पाइपलाइन बिस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या ७१ पुग्यो, ७६ घाइते
एजेन्सी । मेक्सिकोमा इन्धनको पाइपलाइनमा बिस्फोट हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या ७१ पुगेको छ। मेक्सीकोको हाइडाल्गो राज्यमा भएको विष्फोटमा परी ७६ जना घाइते भएको उक्त राज्यका प्रशासन प्रमुख ओमार फायरले जनाएका छन्। ती मध्ये केहीको अवस्ता गम्भीर रहेको छ।
मोबाइलको पासवर्ड नदिँदा श्रीमतीले श्रीमानलाई जिउँदै जलाइन्
माघ । आफ्नो मोबाइलको पासवर्ड निदिँदा श्रीमतीले श्रीमानलाई जिउँदै जलाएकी छिन् । यो घटना इन्डोनेसियाको हो ।
राष्ट्रपतीय निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक नगर्न अफ्रिकन युनियनको आग्रह
एजेन्सी । अफ्रिकन युनियनले राष्ट्रपतीय निर्वाचनको नतिजा तत्काल सार्वजनिक नगर्न कंगो सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
केन्यामा मारिनेको संख्या २१ पुग्यो, ५० जना अझै भेटिएनन्
नैरोबी । केन्याको नैरोबीस्थित एक विलाशी होटलमा २१ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हमलामा ५० जना अझै हराइरहेका छन् ।
चीनले उमार्‍यो चन्द्रमामा पहिलो बिरूवा
एजेन्सी । चीनले पहिलो पटक चन्द्रमामा बिरूवा उमारेको छ। समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार गत जनवरी ३मा चन्द्रमाको छेउमा अवतरण भएको अन्तरिक्ष यान चांगअ–४ ले लिएको कपासको बिउ चन्द्रमामा टुसाएको हो।
बेलायती प्रधानमन्त्री मेको ठूलो हार, ब्रेक्जिट डिल संसदबाट अस्वीकृत
काठमाडौं । ब्रेक्जिट डिल अर्थात युरोपीय संघबाट ब्रिटेन अलग हुने प्रधानमन्त्री टेरिजा मेको योजनालाई संसदले अस्वीकार गरेको छ ।
कार्गो विमान दुर्घटनामा १० जनाको मृत्यु
एजेन्सी । कार्गो विमान दुर्घटना हुँदा सोमबार इरानमा १० जनाको मृत्यु भएको छ ।
फ्रान्स सरकारविरुद्ध सुरु भयो नवौं चरणको आन्दोलन
एजेन्सी । फ्रान्स सररकाले इन्धनको मूल्य बढाएपछि थालिएको आन्दोलन अझै रोकिएको छैन्।
इन्धनमा भएको मूल्यविरुद्ध सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरुले आफ्नो नवौं चरणको आन्दोलन सुरु गरेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा ठाउँ–ठाउँमा उनीहरुको प्रहरीसँग भिड्न्त पनि भएको छ। भीडलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले पानीका फोहोरा र अश्रुग्यास प्रयोग गरेको छ। इन्धनमा भएको मूल्यबृद्धिलाई लिएर सुरु प्रदर्शनमा पछिल्लो दिन नयाँ–नयाँ मागहरु थपिने क्रम जारी छ।
डेढ अर्ब प्रकाश वर्ष टाढाबाट आइरहेका रहस्यमय तरंगहरू
एजेन्सी । क्यानडामा रहेको एउटा दुरबिनले समातिरहेको धेरै टाढाको आकाशगंगाबाट निस्केका रहस्यमय रेडियो संकेतबारे खगोलविद्हरूले विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।
अमेरिका–मेक्सिको सीमामा पर्खाल लगाउन ट्रम्प अडिग
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आज टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत अमेरिकी सीमा क्षेत्रमा पर्खाल लगाउने विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिका–मेक्सिको सीमामा पर्खाल बनाउने कुरामा अडिग रहेको बताएका हुन्।
चीनको अर्को चमत्कार, चीन–हङकङ–मकाउ जोड्न बनायो विश्वकै लामो सामुद्रिक पुल
हङकङ । चीनले संसारलाई चकित तुल्याउने गरी छोटो समयमै विश्वकै लामो समुन्द्री पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ । हङकङ–मकाउ–चुहाई जोड्न ७ किलोमिटर सामुद्रिक सुरङसहित ५५ किलोमिटर लामो सामुद्रिक पुल चीनले निर्माण गरेर उद्घाटन गरेको हो ।
मलेसियाका राजाले गद्दी त्याग गरेको घोषणा
क्वालालम्पुर । मलेसियाका राजा सुल्तान मुहम्मद पाँचौंले राजगद्दी त्याग गरेको राजप्रासाद अधिकारीहरुले आइतबार बताएका छन्। यो घोषणासँगै मलेसियाका राजा बिदामा बस्नुको कारणबारे केही सातादेखिको चलिरहेको अडकलबाजी समाप्त भएको छ।
अमेरिकामा वर्षौंसम्म सरकारी काम ठप्प पार्ने ट्रम्पको चेतावनी
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा धरै वर्षसम्म सरकारी कामकाज ठप्प हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकामा सरकारी कामकाज आंशिक रुपमा ठप्प भएको दुई हप्ताभन्दा बढी समय भइसकेको बेला राष्ट्रपति ट्रम्पयको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको हो ।
‘इन्टरनेटका पिता’को हृदयाघातका कारण निधन
अमेरीका । इन्टरनेटका प्रतिपादक मानिने अमेरिकी वैज्ञानिक ल्यारी रोबर्टस्को ८१ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । इन्टरनेटको पहिलो प्रारुपको डिजाइन तथा निर्माण गरेका रोबर्टस्को गत २६ डिसेम्बरमा हृदयाघातका कारण निधन भएको हो ।
सौर्यमण्डलमा सबैभन्दा टाढा चलाइएको सफल अभियान यस्तो देखियो ‘अल्टीमा टुले’
एजेन्सी । अमेरिकी स्पेस एजेन्सीको अभियान ‘न्यु होराइजन्स’ सौर्यमण्डलको बाहिरी भागमा अवस्थित अल्टिमा टुले नामक पिण्डको नजिक पुगेको छ ।
ताइवानलाई चीनमा मिल्न सीको आग्रह
चीन । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवान चीनमा एक हुने र यसका लागि ताइवानका नागरिकले पहल गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
केरलको सबरीमला मन्दिरमा दुईजना महिला प्रवेश गरे, शुद्धिकरणका लागि भन्दै मन्दिर बन्द गरियो
केरल । बुधबार बिहान केरलको सबरीमला मन्दिरमा दुई जना महिला प्रवेश गरेका छन् । यसभन्दा पहिले पनि सबरीमला मन्दिरमा महिलाहरु प्रवेश गर्ने प्रयास गरे पनि सफल भएका थिएनन् ।
ट्रम्प भन्छन्ः बरु सरकारी कार्यालय नै बन्द होउन्, सीमामा पर्खाल लाउने बजेट रोक्न सकिन्न
वासिङटन । संयुक्त राज्य अमेरिकाका सङ्घीय कार्यालयहरु बजेट अभावमा आंशिक बन्द भएको डेढ हप्ता भइसक्यो । अमेरिकी कङ्ग्रेसको माथिल्लो सदन सिनेटमा डेमोक्राट पार्टीले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सीमा पर्खालका लागि बजेटको व्यवस्था नगरी बाँकी बजेट मात्र पारित गर्ने प्रस्ताव पुनः अगाडि सारेको छ ।
रुसमा शक्तिशाली बिस्फोटः चारको मृत्यु, ४० बेपत्ता
एजेन्सी । रुसी शहर माग्नितोगोस्र्कमा एक भवनमा शक्तिशाली बिस्फोटका कारण कम्तीमा चारजनाको मृत्यु भएको छ ।
मतदानकै दिन बंगलादेशमा दुईको मृत्यु
ढाका । बंगलादेशमा मतदानकै दिन आइतबार निर्वाचन क्रममा भएको झडपमा परी दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मतदानकै सिलसिलामा विभिन्न ठाँउमा हिंसात्मक घटना भएको र दुई जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
आज बंगलादेशमा संसदीय चुनाव
एजेन्सी । बंगलादेशमा आज संसदीय निर्वाचन हुँदैछ। तीन सय सिटका लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा १० करोड मतदाताले ४० हजार १ सय ९९ मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नेछन्। निर्वाचनमा सत्तारुढ अवामि लिग र प्रतिपक्षी बंगलादेश नेशनलिष्ट पार्टीबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
दोस्रो विश्वयुद्धका सबैभन्दा वृद्ध योद्धाको ११२ वर्षमा निधन
अमेरिकाका सबैभन्दा वृद्ध व्यक्ति एवं दोस्रो विश्वयुद्धका सबैभन्दा वृद्ध योद्धा मानिने रिचर्ड ओवर्टनको एक सय ११२ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ ।
भारतद्वारा ४ हजार किलोमिटरसम्म हान्न सक्ने मिसाइलको परीक्षण
एजेन्सी । भारतले ४ हजार किलोमिटर परसम्म प्रहार गर्न सक्ने नयाँ मिसाइलको परीक्षण गरेको छ।
अग्नि चौंथौ मिसाइल २० मिटर लामो छ भने यसको तौल १७ टन छ।
सुनामीबाट मृतकको संख्या २८१ पुग्यो, फेरि सुनामी आउने चेतावनी
एजेन्सी । इन्डोनेसियामा शनिबार राति भएको ज्वालामुखी विस्फोट र त्यसपछिको सुनामीबाट ज्यान जाने व्यक्तिको सङ्ख्या २८१ पुगेको छ ।
अफगानिस्तानको पूर्वी प्रान्त घाज्नीमा छ तालिबानी लडाकू मारिए
घाज्नी । अफगानिस्तानको पूर्वी प्रान्त घाज्नीमा तालिबान लडाकू र सरकारी सुरक्षाबलबीच भएको दोहोरो झडपको क्रममा कम्तीमा छ तालिबानी लडाकू मारिएका छन् ।
ट्रम्पका रक्षामन्त्रीले अचानक दिए राजिनामा, आखिर किन
अमेरिकी राष्ट्रपतिका रक्षामन्त्री जेम्स म्याटिसले अचानक राजीनामा दिएका छन् ।
अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति ओबामा धोक्रो बोकेर अस्पताल पुगे
काठमाडौं । नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, मन्त्रीलगायतका भीआईपीहरुको रवाफ थेगिनसक्नुको छ । सर्वसाधारणलाई जाममा पार्दै साइरनजडित गाडीमा हुइँकिनेदेखि भड्किलो जीवनशैली अपनाउनु उनीहरुको दैनिकी नै हो । यही कारण नेपालका भीआईपीहरु सर्वसाधारणका नजरमा आलोच्य छन् ।
सोल्स्कसायर युनाइटेडका नयाँ म्यानेजर
एजेन्सी । म्यान्चेस्टर युनाइटेडले ओली गनर सोल्स्कसायरलाई क्लबको नयाँ म्यानेजर घोषणा गरेको छ, तर गल्तीले ।
ट्रम्पको च्यारिटी फाउन्डेशन किन बन्द हुँदै
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको विवादित च्यारिटी फाउन्डेशन बन्द गर्ने सहमती भएको छ ।
बेल्जियमका प्रधानमन्त्री चार्ल्स मिचेलले दिए राजीनामा
बेल्जियमका प्रधानमन्त्री चार्ल्स मिचेलले आप्रवासी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघसँगको सहमतिमा असहमति जनाउँदै पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
जापानको एक रेष्टुराँमा भएको शक्तिशाली विस्फोटको छानबिन शुरु
टोकियो । जापान प्रहरीले आइतबार राति साप्पोरोस्थित एक रेष्टुराँमा भएको शक्तिशाली विस्फोटको छानबिन थालेको जनाएको छ । उक्त विस्फोटबाट ४२ जना घाइते हुनुका साथै वरिपरिका केही भवनमा क्षति भएको थियो ।
श्रीलंकामा संसद विघटन अदालतद्वारा अवैधानिक घोषित
कोलम्बो । श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति सिरिसेना मैत्रीपालाको कदम अवैधानिक भएको ठहर गरेको छ।
मुकेश अम्बानीकी छोरीको बिहे खर्च १५ अर्ब
एजेन्सी । भारतको मुम्बईमा बुधबार दुई धनाढ्य परिवारबीच वैवाहिक सम्बन्ध गासिँदैछ। अर्बपति मुकेश र निता अम्बानीकी छोरी इशा र पिरामल ग्रुपका मालिक अलय पिरामकलका छोरा आनन्दको डिसेम्बर १२ मा बिहे तय भएको हो।
फ्रान्सका राष्ट्रपति आफ्नो छवी सुधार्दैः न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने बचन
फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोंले महँगीविरुद्ध चलिरहेको प्रदर्शनको जवाफमा थुप्रै कल्याणकारी कदम उठाउने घोषणा गरेका छन् ।
चीनमा आइफोन बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउन अदालतको आदेश
एजेन्सी । चीनको एउटा अदालतले अमेरिकी स्मार्टफोन निर्माता एप्पलका केही मोडलका फोन चीनमा आयात र बिक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिएको छ।अमेरिकी माइक्रो चिप निर्माता क्वालकमले एप्पलका केही फोनमा आफ्नो नाममा रहेको प्याटेन्ट चोरी गरेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरको थियो।
महिला हिंसाको डरलाग्दो तथ्यांकः २०१७ मा मारिए ८७ हजार महिला, आफन्तबाटै खतरा
न्यूयोर्क । महिला हिंसाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान भर्खरै सम्पन्न भएको छ । यो अभियान मनाइरहँदा पनि नेपालमा विभिन्न ठाउँमा महिलाहरु तथा बालबालिकाहरु बलात्कृत र हिंसाको सिकार भएको खबर आइरहेकै थिए । पछिल्लो समय नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि नै महिला हिंसाका घटनामा वृद्धि भइरहेको छ ।
भूकम्पले तहसनहस सडक चार दिनमै निर्माण गरेपछि अमेरिकीहरु नै चकित
एजेन्सी । गत शुक्रबार अमेरिकाको अलस्कामा गएको ७ रेक्टर स्केलको भूकम्पले विशेषगरी सहरका मुख्य सडकहरुलाई तहसनहस पारिदिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग जोड्ने सडक समेत नराम्रोसँत भत्किएपछि त्यहाँको अवस्थामा सुधार ल्याउन समय लाग्ने सबैको अनुमान थियो ।
अमेरिकी विमान ठोकिदाँ पाँचजना बेपत्ता
मेक्सिकोका राष्ट्रपतिले बेचिदिए आफू चढ्ने जहाज
एजेन्सी । कुनै जहाजमा यात्रा गरिरहँदा तपाईंले छेउको सिटमा आफ्नो देशको राष्ट्रपति भेट्नुभयो भने के होला ? नेपालजस्ता राष्ट्रपतिको सवारी हुँदा नागरिक रोकेर बाटो खाली गराउने देशमा त यो कल्पनामात्र भयो तर दक्षिण अमेरिकी देश मेक्सिकोका नागरिकले भने छेउको सिटमा राष्ट्रपति पनि भेट्न सक्ने भएका छन्।
हवाई यात्रु ८ अर्ब २० करोड, जीडीपीमा ५५ खर्ब डलर योगदान
जेनेभा । इन्टरनेसनल एयर ट्रान्स्पोर्ट एसोसिएसन (आएटा) ले आगामी दुई दशकमा हवाई यात्रुको संख्या दोब्बरले बढेर ८ अर्बभन्दा बढी पुग्ने तथ्यांक प्रक्षेपण गरेको छ ।
फ्रान्समा आनदोलनरत पक्ष र प्रधानमन्त्रीबीच वार्ता हुँदै
एजेन्सी । इन्धन मूल्यबृद्धिको विरोधमा भइरहेको पहेँलो ज्याकेटधारी आन्दोलनकर्ताका प्रतिनिधि र फ्रान्सेली प्रधानमन्त्री एडोआर्ड फिलिपेबीच आज मंगलबार वार्ता हुँदैछ ।
अमेरिकाका ४१ औं राष्ट्रपति जर्ज एच.डब्लू बुशको निधन
अमेरिकाका ४१ औं राष्ट्रपति जर्ज हर्बर्ट वाकर बुश (जर्ज एच.डब्लू बुश) को ९४ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ ।
अफ्रिकादेखि क्यानडासम्म एकैचोटि आएको भुइँचालो तरंग
एजेन्सी । संसारको आधाजसो भूभागमा रेकर्ड भएको भुइँचालो तरंगले वैज्ञानिकहरूलाई अचम्ममा पारेको छ।
यो तरंग शक्तिशाली नभए पनि दायरा फराकिलो थियो। यो यति धेरै क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो, १८ हजार किलोमिटर पर रहेका भुइँचालो नाप्ने उपकरणमा समेत यसको तरंग रेकर्ड भयो।
टिब्लीसी। जर्जियामा भएको निर्वाचनमा सालोम जुराबिशभिली राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ । सत्तारुढ दलका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुभएकी सालोम जर्जियाको पहिलो महिला राष्ट्रपति हुनुभएको छ ।
च्याम्पियन्स लिगमा समूह डी को समीकरण रोचक बन्दै
एजेन्सी । च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा समूह डी को समीकरण रोचक बनेको छ। यस समूहमा रहेका तीन टिम नेपोली, लिभरपुल र पीएसजीले दोस्रो चरणमा पुग्ने सम्भावाना कायमै राखेका छन्।
जापानले सुरू गर्‍यो कोटेश्वरको जाम हटाउन सुरूङको अध्ययन
काठमाडौं। राजधानीको कोटेश्वर क्षेत्रमा जाम कम गर्न सुरूङ मार्ग बनाइनेछ।
कोटेश्वरबाट भक्तपुर जाने बाटोमा सुरूङ मार्ग बनाउन जापानले अध्ययन गर्दैछ।
सडक विभागको विकास सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख सञ्जयकुमार श्रेष्ठले एक महिनापछि सुरूङको अध्ययन गर्ने जानकारी दिए।
मेक्सीकोको सिमा क्षेत्रबाट ४२ आप्रवासी पक्राउ
वासिङ्टन । अमेरिकी सिमा सुरक्षाबलले मेक्सीकोसँगको सिमाक्षेत्रबाट ४२ जना आप्रवासीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
रुसले तीनवटा जहाज कब्जा गरेपछि युक्रेन आक्रोशितः तनाव चुलियो
रुसले क्रिमियाली प्रायद्वीप नजिकै युक्रेनको तीनवटा नौसैनिक जहाज कब्जा गरेपछि दुई देशबीचको तनाव थप चुलिएको छ ।
भारतको जयपुरनजिकै कटाकमा सडक दुर्घटना बाह्रको मृत्यु
कटाक, उडिसा (रासस÷एएनआई)। भारतीय शहर जयपुरनजिकै कटाकमा मङ्गलबार भएको एक बस दुर्घटनामा १२ जनाको मृत्यु भएको छ ।
नेइमार र एम्बाप्पे घाइते हुँदा पिएसजी समस्यामा
एजेन्सी । आफ्नो स्टार खेलाडीद्वय नेइमार र एम्बाप्पे घाइते हुँदा फ्रान्सेली क्लब पीएसजीलाई ठूलो संकट परेको छ।
नेइमार मंगलबार राति क्यामरूनसँगको खेलमा घाइते भएका थिए।
डढेलोग्रस्त क्षेत्रमा पुगे ट्रम्प
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प डढेलोले विनास गरेको क्यालिफोर्नियाको अवलोकन गर्न पुगेका छन्। ‘क्याम्प फायर’ नाम दिइएको डढेलोका कारण अमेरिकको क्यालिफोर्नियामा अहिलेसम्म ७१ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक हजारभन्दा बढी मानिस हराइरहेका छन्।
इजरायली रक्षामन्त्रीले दिए राजीनामा, सरकारले युद्धविराम घोषणा गरेकोमा असन्तुष्टि
एजेन्सी । इजरायली रक्षामन्त्री अभिग्डोर लिबरमेनले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। इजरायलले प्यालेस्टिनी हमाससँग युद्धविरामको घोषणा गरेपछि रुष्ट बनेका रक्षामन्त्री लिबरमेनले राजीनामा दिएका हुन्।
अमेरिकी ड्रोन आक्रमणबाट प्रहार गरिएका क्षेप्यास्त्रबाट मारिने अधिकांश सर्वसाधारण
अताक, यमन । संयुक्तराज्य अमेरिकाले यमनमा सक्रिय अल–कायदा समूहलाई दबाउने उद्देश्य राखेर ड्रोन (मानवरहीत विमान) युद्ध छेडेको १६ वर्ष पुगिसकेको छ । तर यो अभियानको मूल्य रहस्यमय देखिएको छ, अर्थात् ड्रोनबाट प्रहार गरिएका क्षेप्यास्त्रबाट मारिने अधिकांश सर्वसाधारण छन् ।
जापानले विदेशी कामदार लिने विधेयक स्वीकृत गर्यो, जापानले नेपालबाट कामदार लैजाला ?
टोकियो। विदेशी कामदारलाई जापानमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले जापानको मन्त्रिपरिषदले शुक्रबार नयाँ मस्यौदा विधेयक स्वीकृत गरेको छ । श्रमिक कामदारको अभाव झेलिरहेको जापानले यो विवादास्पद विधेयक स्वीकृत गरेको बताइएको छ ।
रूवाण्डामा दुई तिहाइ सांसद महिला, बन्यो विश्व रेकर्ड
काठमाडौं । पूर्वी अफ्रिकी मुलुक रूवाण्डाको तल्लो सदनमा दुई तिहाई महिला सांसद बनेका छन् ।
यसअघि ६४ प्रतिशत महिला रहेको रूवाण्डाले आफ्नै रेकर्ड तोड्दै विश्वमै सबैभन्दा बढी महिला भएको संसद बनाएको हो ।
पोर्तुगलमा भारी बर्षा स् राजधानी लिस्बन जलमग्न भएसंगै कयौ स्थानमा बाढी
ग्रेटर लिस्बनमा आइतवार बिहान भएको भारी वर्षाले धेरै स्थानहरू जलमग्न हुनुका साथै कयौ स्थानमा बाढी समेत आएको छ।
बेलास (सिन्त्रा) मेम मार्टिन्स र मासामा जोड्ने एउटा महत्वपुर्ण चौराहा सडक पुरै बाढीले डुबेको छ भने सिन्ट्रामा कयौ सडकहरु बाढीले कटान गरेको छ।
कंगोमा इबोला महामारीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या २०० नाघ्यो
प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोमा इबोला महामारीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या २०० नाघेको छ ।पछिल्लो पटक फैलिएको इबोला महामारिका कारण कंगोको ब्यान्डा शहर, किभु क्षेत्रको बेनी शहर सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ ।
नेपालका प्राध्यापक झा चीनमा पुरस्कृत
काठमाडौं । चीनको सियान सरकारले नेपाली प्राध्यापक डा. राजीवकुमार झालाई सन् २०१८ को लागि ‘सियान फ्रेण्डसिप अवार्ड’ पुरस्कार प्रदान गरेको छ ।
साउदीले परमाणु रियाक्टर बनाउने
एजेन्सी । साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिल सलमानले परमाणु रियाक्टर बनाउने योजनाको घोषणा गरेका छन्।
‘कठोर’ अमेरिकी प्रतिबन्धका बाबजुद इरानले कच्चा तेल बिक्री गर्ने
तेहरान । अमेरिकी ‘कठोर’ आर्थिक प्रतिबन्धका बाबजुद इरानले तेलको कच्चा पदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्ने राष्ट्रपति हसन रौहानीले सोमबार जनाउनुभएको छ ।
१८८ सवार विमानको मुख्य भाग भेटियो, यात्रुको अवस्था अज्ञात
एजेन्सी । इन्डोनेसियाको लायन एयरको बोइङ ७३७ यात्रुबाहक विमानको खोजीमा सम्लग्न गोताखोरको समूहले दुर्घटनाग्रस्त उक्त विमानको मध्य भाग अर्थात यात्रु तथा विमान चालक दलका सदस्यहरू रहने भाग पानीभित्र भेटेको बताएका छन्।
नयाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त
एक सय ९० यात्रु सवार लायन एयर फ्लाइट जेटी ६१० विमान इन्डोनेशियाको जकार्ताबाट सोमबार उडेको केही क्षणमै समुन्द्रमा दुर्घटनाग्रस्त भयो ।
समुद्रमा विमान खस्दा अधिकांशको ज्यान गएको आशंका
इन्डोनेसिया । इन्डोनेसियामा विमान दुर्घटना भएको छ । इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्टाबाट उडेको लगत्तै लायन एयरको बोइङ्ग ७३७ यात्रुवाहक विमान दुर्घटनामा परेको हो ।
ओबामा, क्लिन्टनलगायतलाई पठाइएको बमका बारेमा अनुसन्धान सुरु
एजेन्सी । संयुक्तराज्य अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा, पूर्वविदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टन तथा अन्य डेमोक्राटिक पार्टीका नेता, अमेरिकी टेलिभिजन संस्था सिएनएनको कार्यालयमा पठाइएका पाइप बमका बारेमा अनुसन्धान सुरु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
चीनले बनायो आठ रेक्टर स्केल भूकम्प थेग्ने विश्वकै लामो पुल
चीनले विश्वकै सबैभन्दा लामो सामुद्रिक पुल बनाएको छ।
आठ रेक्टर स्केलसम्मको भूकम्पले पनि नभत्किने ५५ किलोमिटर लम्बाइको उक्त पुलले चीनका स्वशासित क्षेत्र हङकङ र मकाउलाई चीनको मुख्य शहर झुहाईसँग जोड्नेछ। यो पुल हालसम्म संसारमा रहेका सामुद्रिक पुलमध्ये सबैभन्दा लामो हो। नौ वर्ष लगाएर उक्त पुल निर्माण गरिएको हो।
पञ्जाबमा दशहरा मेला हेर्न जम्मा भएकाहरुको भीडमा रेल दौडिँदा कम्तीमा ६० जनाको मृत्यु
पञ्जाब । भारतको उत्तरी राज्य पञ्जाबको अमृतसरमा एउटा रेल रावण दहनको मेला हेर्न जम्मा भएका मानिसहरूको भिडको बीचबाट दौडिँदा कम्तीमा ६० जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् ।
क्याम्पसमा गोली प्रहार १९ को मृत्यु
युक्रेनको स्वायत्त क्षेत्र क्राइमियास्थित एक क्याम्पसका अन्धाधुन्ध गोली प्रहार हुँदा १९ जनाको मृत्यु भएको छ। क्राइमियाको क्रेर्च टेक्निकल कलेजमा अध्ययनरत १८ वर्षीय विद्यार्थी भ्यादिस्लाभ रोसल्याकोभले आफ्ना साथीहरुमाथि अन्धाधुन्ध गोली चलाएका हुन्।
लामो उडान गर्ने होडबाजी
लन्डन । बिहीबार सिंगापुरदेखि न्यूयोर्कसम्म ननस्टम उडान सेवा सुरु भएपछि यसले सबैभन्दा लामो रुटमा ननस्टम उडान भर्ने यसअघिको रेडर्क तोडेको छ । सिंगापुर एयरलाइन्सले ५ वर्षपछि फेरि सिंगापुरदेखि न्युयोर्कसम्म उडान सुरु गरेको छ ।
अमेरिकामा सय वर्षपछिको सबैभन्दा खतरनाक आँधी, अकल्पनीय विनाशको चेतावनी
अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यको तटमा माइकल नामको आँधी पुगेको छ । यो आँधी श्रेणी चारमा परिवर्तन भइसकेको छ अर्थात् अत्यधिक खतरनाक आँधी । राष्ट्रिय आँधी केन्द्रका अनुसार बुधबार दिउँसोको आँधीले फ्लोरिडाको मेक्सीको बीचमा पहिलो कदम राखेका थियो ।
५३ सय मेगावाट बिजुली निकाल्न चन्दा उठाउँदै इमरान
चन्दा उठाएर साना र समान्य काम भएको त आम मानिसलाई थाहा छ। तर ठूला ठूला परियोजना चन्दा उठाएर निर्माण गरिएको इतिहास संसारमा नै एकदमै कम रहेको छ। तर पछिल्लो पटक पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले स्वदेशी लगानीमा नै ५३०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका लागि चन्दा उठाउन थालेका छन्। पछिल्ला केही वर्षदेखि पाकिस्तानले चरम ऊर्जा संकट भोग्दै आएको छ।
जापानका प्रधानमन्त्रीले गरे मन्त्रिपरिषद्‍मा हेरफेर, रक्षामन्त्रीमा ताकेसी इवाया
एजेन्सी । जापानका प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी रक्षामन्त्रीमा नयाँ व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। मन्त्रिपरिषदका अन्य सदस्यहरूमा खासै हेरफेर गरिएको छैन। मुख्य सचिव योशीहिदे सुगाले मन्त्रिपरिषदको नयाँ नाम सार्वजनिक गरेका थिए।
इण्डोनेशियामा भुकम्प र सुनामीः १००० भन्दा बढीको मृत्यु, १२०० कैदी भाग्न सफल
जकार्ता । इण्डोनेशियामा भुकम्प र सुनामीले तहल्का नै मच्चाएको छ । भुकम्प र सुनामीले हरेक क्षेत्रमा क्षति पु¥याएको छ । यसै भुकम्प र सुनामीका कारण १००० जना भन्दा बढी मानिसहरुले ज्यान घुमाएका छन् । अझैं पनि ती शबहरु खुल्ला जमिनमै रहेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ, भने महामारी फैलनसक्ने आँकलन गरिएको छ ।
अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडाबीच व्यापारमा सहमति
वासिङ्टन । क्यानडा र संयुक्तराज्य अमेरिकाका व्यापार मध्यस्थकर्ताहरुबीच बहुचर्चित उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा आवश्यक परिमार्जन सहित प्रतिस्थापन गर्न सहमति भएको छ । दुबै देशका सरकारका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा अब नयाँ सम्झौताको नाम संयुक्तराज्य अमेरिका–मेक्सिको–क्यानडा सम्झौता (युएसएमसीए) हुनेछ ।
जापानः आँधी चामीको असरले एक हजार उडान रद्द
एजेन्सी । जापानमा शक्तिशाली आँधी चामीका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ । रिपोर्ट अनुसार आँधीका कारण थुप्रै घाइते भएका छन् भने उडान र रेलमा पनि असर पुगेको छ ।
चामीको असरले कम्तीमा एक हजार उडान रद्द भएको बताइएको छ ।
क्यानडाले आङ सान सुकीलाई दिइएको मानार्थ नागरिकता खोस्यो
एजेन्सी । क्यानडाको संसदले म्यानमारको नेता आङ सान सुकीलाई दिइएको नागरिकता फिर्ता लिने सम्बन्धी प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । म्यानमारमा चलिरहेको रोहिंग्या संकटको पृष्ठभूमिमा यो कदम उठाइएको हो ।
स्वीट्जरल्याण्डका दुई मन्त्रीको राजिनामा
एजेन्सी । स्वीट्जरल्याण्डका उर्जा मन्त्री डोरिस लेथार्डले बिहीबार राजिनामाको घोषणा गरेका छन ।
उनको राजिनामा यस वर्षको अन्त्यतिर मात्रै लागु हुने समाचारमा जनाइएको छ । उनीसँगै स्वीट्जरल्याण्डमा एक हप्तामा दुई मन्त्रीले राजिनामाको घोषणा गरेका छन् ।
१ डलर बराबर ११७ रुपैयाँ पुग्यो, दशै महंगो बन्दै
काठमाडौं । नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसंग फेरी कमजोर भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि १ डलर बराबर ११७ रुपैयाँ बिक्री दर तोकेको छ । यो हालसम्मको उच्च दर हो । अमेरिकी डलरसंग भारतीय रुपैयाँ भारु कमजोर भएपछि यसको असर नेपाली रुपैयामा परेको हो । भारु कमजोर भई १ डलर बराबर ७२.९६ रुपैयाँ पुगेको छ ।
मलेसियामा दुई नेपालीको मृत्यु
काठमाडौं । मलेसियामा विषाक्त मदिरा सेवनबाट मृत्यु हुने नेपालीको सङ्ख्या ६ पुगेको छ। मदिरा सेवनबाट मंगलबार ४ नेपालीको मृत्यु भएको थियो। आज थप दुई जनाको ज्यान गएको हो। विषाक्त मदिरा सेवनबाट १७ जना नेपाली गम्भीर बिरामी परेका छन्।
चिनियाँ पूर्व सांसदलाई १६ बर्षे जेल सजाय
चाङ्चुङ । चीनको उत्तरपूर्वी लिओनिङ प्रदेश सभाका वरिष्ठ पूर्व सदस्य लि वेङ्कलाई १६ बर्षे जेल सजाय सुनाइएको छ ।
क्यालिफोर्नियामा गोली चल्यो, पाँच जनाको हत्या
अमेरिका । अमेरिकाको क्यानिफोर्नियामा एकजना बन्धुकधारीले जथाभावी गोली चलाएर बुधबार पाँच जनाको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । गोली चलाउने व्यक्तिले आफ्नै श्रीमतीको पनि हत्या गरी आत्महत्या गरेका छन् ।
कोरियन एयरका अध्यक्षमाथि प्रहरी सोधपुछ
सिओल । कोरियन एयरका अध्यक्ष चो याङ–होले आफ्नो निवासको सुरक्षा सेवाका लागि कम्पनीको रकम खर्च गरेको आरोपमा बुधबार प्रहरीले सोधपुछ गरेको छ ।
पाकिस्तानी पूर्वप्रधानमन्त्री नवाजकी श्रीमती कुल्सुमको निधन
पाकिस्तान । पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफकी श्रीमती कुल्सुम नवाजको मृत्यु भएको छ। उनको ६८ वर्षको उमेरमा उपचारका क्रममा लण्डनमा मृत्यु भएको बिबिसीले जनाएको छ। तीन पटकसम्म पाकिस्तानको फस्ट लेडी भएको कुल्सूमको सन् २०१७ देखि क्यानसरको उपचार गराउँदै आएकी थिइन्। उनलाई गत जुलाई १४ मा हृदयाघातसमेत भएको थियो। उनका श्रीमान् नवाज सरिफ र छोरी म्यारन भ्रष्टचारको आरोपमा जेलमा छन्।
सी र पुटिनबीच विश्व शान्तिका लागि छलफल
रूस । चीनका राष्ट्रपति सी चीन पिङ र उहाँका रूसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनबीच रूसको सुदूरपूर्वी शहर भ्लादिभोस्टोकमा भेट भएको छ ।
ट्रम्पका पूर्वसल्लाहकारलाई जेल सजायको फैसला
वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका एकजना पूर्वसल्लाहकारलाई १४ दिनका लागि जेलसजायको फैसला सुनाइएको छ ।
फेसबुकको दुरुपयोग गरेको आरोपमा १२ जना पक्राउ
बैङ्कक । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गलत सामग्रीहरु राखेको आरोपमा थाईल्याण्डको प्रहरीले १२ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
चिनीया राष्ट्रपति रसिया शिखर बैठकमा सहभागी हुने
बेइजिङ । चिनीया राष्ट्रपति सी जिनपिङ अर्को साता रसियामा आयोजना हुने क्षेत्रीय सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुने चिनीया विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । जापान र दक्षिण कोरियाका प्रधानमन्त्रीहरु पनि सहभागी हुने उक्त सम्मेलनमा उत्तर कोरियाली नेता कीम जोङ उनलाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ ।
नर्वेमा विश्वकै अग्लो काठको टावर निर्माण
ओस्लो । नर्वेमा विश्वकै सबैभन्दा अग्लो काठको टावर निर्माण कार्य सकिएको छ । अधिकारीहरुले दिएको जानकारीअनुसार टावर ८५।४ मिटर अग्लो रहेको छ । जसमा १८ तला रहेको छ ।
इस्लामाबाद । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानको दल तेहरिक–ए–इन्साफका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुभएका आरिफ अल्भी पाकिस्तानको नयाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ ।
याङ्गुन । म्यान्मारको एक अदालतले सोमबार जेल सजाय सुनाएका बेलायती पत्रकारलाई रिहा गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले म्यानमार सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
चीनमा पशुमा लाग्ने रोग नियन्त्रणका लागि ३८ हजार सुँगुर मारियो
चीन । चीनमा सुँगुरबाट सोही जातका चौपाया फैलिने ज्वरो अफ्रिकन स्वाइन फेभर को प्रकोप नियन्त्रणका लागि ३८ हजारभन्दा बढी सुँगुर मारिएको चिनिँया समाचार समिति सिन्ह्वाले आइतबार जनाएको छ ।
भारतका राष्ट्रपति युरोप भ्रमणमा
नयाँ दिल्ली । भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द आइतबार युरोपका तीन देशको भ्रमणका लागि त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ ।
घनघोर बर्षापछि दिल्लीमा डुबान
नयाँ दिल्ली । भारतको राजधानीमा परेको घनघोर बर्षाका कारण यहाँका केही भागमा डुवान हुँदा दिल्लीको यातायातलगायतका दैनिक जनजीवन कष्टकर बनेको छ ।
ट्रम्पद्वारा सञ्चारमाध्यमको फेरि आलोचना
अमेरिका । सञ्चारकर्मीको उपस्थितिमा भएका उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताबारे गरेका अनौपचारिक प्रतिक्रियालाई बाहिर ल्याएको भनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसप्रति चासो व्यक्त गर्नुभएको छ ।
रेडक्रसका महासचिव सी सोमबार नेपाल आउँदै
काठमाडौँ । रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव यास सी चारदिने भ्रमणका क्रममा भोलि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति र सोमालियाका राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
बेइजिङ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र सोमाली राष्ट्रपति मोहमद अब्दुल्लाह मोहमदबीच शुक्रबार भेटवार्ता भएको छ ।
अफ्रिकामा ५० लाख बालबालिकाको मृत्यु
पेरिस । अफ्रिकामा जारी सशस्त्र द्वन्द्वबाट सिर्जित चोटपटक, रोग र भोकका कारण सन् १९९५ देखि २०१५ सम्मका २० वर्षको अवधिमा पाँच वर्षमुनिका करिब ५० लाख बालबालिकाको मृत्यु भएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
जापानको प्रतिरक्षा बजेटमा ठूलो वृद्धि
टोक्यो । जापानको रक्षा मन्त्रालयले उत्तर कोरिया र चीनबाट जारी चुनौतीको सामना गर्नेगरी क्षेप्यास्त्र प्रणाली र हवाई क्षमता सुदृढ गर्ने उद्देश्यले ठूलो बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।
सेनाको हेलिकोप्टर दुर्घटना हुँदा १८ को मृत्यु
आडिस आबाबा । सेनाको हेलिकोप्टर दुर्घटना हुँदा बिहीबार इथियोपियामा १८ जनाको मृत्यु भएको छ ।
भुटानका विशिष्ट पाहुना राजधानीमा
काठमाडौँ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनमा भाग लिन भुटानको अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार ल्योन्पो छिरिङ वाङचुक आज बिहान राजधानी आइपुग्नुभयो ।
पुटिनका आलोचक नाभाल्नीलाई जेल सजायको फैसला
मस्को । रुसको एउटा अदालतले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कडा आलोचक एलेक्सै नाभाल्नीलाई जेल सजायको फैसला गरेको छ ।
भूकम्पको कहरः इन्डोनेसिया भूकम्पबाट मर्नेको संख्या ५५५ पुग्यो
जकार्ता । इन्डोनेसियाको पर्यटकीय द्वीप लोम्बोकमा गएको शक्तिशाली भूकम्पबाट मृत्यु हुनको संख्या ५५५ पुगेको छ । साथै यस भूकम्पमा परी करिब एक हजार ५०० घाइते भएका छन् भने लाखौै व्यक्ति घरवारबिहिन भएका छन् ।
वासिङटन । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले उत्तर कोरियाको पारमाणविक हतियार कार्यक्रम अन्त्य गर्नेसम्बन्धी परामर्शका लागि अर्को साता उत्तर कोरिया जान लाग्नुभएको छ । उहाँले उत्तर कोरियाका लागि अमेरिकी विशेष प्रतिनिधिमा फोर्डका उपाध्यक्ष स्टेफेन बिगनलाई नियुक्त गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
सिड्नी । सत्तारुढ लिबरल पार्टीभित्रको नाटकीय विद्रोहसँगै अस्ट्रेलियाको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा स्कट मरिसन चुनिनुभएको छ । विगत एघार वर्षको अवधिमा सातौं प्रधानमन्त्रीका रुपमा उहाँले पदभार ग्रहण गर्न लाग्नुभएको हो । औसतमा सुधारवादी ठानिएका म्याल्कम टर्नबुललाई उहाँकै लिबरल पार्टीका कट्टरपन्थीहरुले पदबाट हटाएका हुन् ।
फेसबुकमा राष्ट्रपतिको आलोचना गर्ने व्यक्ति पक्राउ
हरारे । फेसबुकमा राष्ट्रपति इमर्सन नानगाग्वाँको आलोचना गरेको आरोपमा जिम्बाबेको प्रहरीले एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ ।
टिएमसी कार्यालयमा विस्फोट
पश्चिम बङ्गाल । भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यको मकरामपुर जिल्लामा रहेको त्रिणमूल काँग्रेसको कार्यालयमा बम विस्फोट भएको छ । विस्फोटमा परी एक व्यक्तिको मृत्यु हुनुको साथै अन्य दुई गम्भीर घाइते भएका छन् ।
इरानको पहिलो घरेलु लडाकू विमान सार्वजनिक
तेहरान । इरानले तेहरानमा आयोजित प्रतिरक्षा प्रदर्शनीका अवसरमा मङ्गलबार पहिलो घरेलु लडाकू विमान सार्वजनिक गरेको छ ।
एल साल्भाडोरसँग चीनको कुटनीतिक सम्बन्ध, चीन र ताइवानबीच विवाद
ताइपेई । चीनले एल साल्भाडोरसँग कुटनीतिक दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेको घोषणा लगत्तै ताइवानले एल साल्भाडोरसँगको दौत्य सम्बन्ध विच्छेद गरेको छ ।
भेनेजुएलामा नयाँ बैंक नोट जारी, सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना
काराकास । सङ्घर्षरत भेनेजुएलाबासीहरु राष्ट्रपति निकोलास मदुरोले देशभित्रको उच्च मुद्रास्फिती नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक गर्नुभएको क्रान्तिकारी नयाँ योजनाबाट किंकर्तव्यबिमुढ भएका छन् । तेलको धनी तर नगदको कमी रहेको भेनेजुएला अहिले उच्च मुद्रास्फितीबाट बेचैन अवस्थामा छ ।
कुन्दुज प्रान्तमा तालिबानद्वारा तीन यात्रुवाहक बस अपहृत
अफगानिस्तान । अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्त कुन्दुजको खान अबाद जिल्लामा तालिबान आतङ्ककारी समूहले सोमबार तीन ओटा यात्रुवाहक बस अपहरण गरेका छन् । यो बसहरु अपहरणमा १५० भन्दा बढी यात्रु परेका जिल्ला गभर्नर हयातुल्ललाह आमिरीले बताउनु भएको छ ।
आफैंले साइकल चलाएर अस्पताल पुगिन्ः गर्भवती मन्त्री
वेलिङ्टन । न्यूजिल्यान्डकी महिला मन्त्री जुली आन गेन्टर पहिलो बच्चा जन्माउने क्रममा प्रसूतिका लागि आफैंले साइकल चलाएर अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ ।
विन मिन्ट र मैथ्रिपाला श्रीसेनाले लुम्बिनी भ्रमण गर्ने
काठमाडौँ । भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा हुने विम्स्टेक शिखर सम्मेलनका लागि नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका म्यान्मारका राष्ट्रपति विन मिन्ट र श्रीलंकी राष्ट्रपति मैथ्रिपाला श्रीसेनाको लुम्बिनी भ्रमणका गर्ने भएको छ। परराष्ट्रमन्त्रालयका अनुसार लुम्बिनीको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । सुरक्षा अंगहरुसँग समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले छलफल थालेको सहप्रवक्ता रामबाबु ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
उनले गरे अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको आलोचना
सिओल । उत्तर कोरियाली नेता कीम जोङ–उनले आफ्नो देशमाथि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध नहटाइएको भन्दै कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन् । उत्तर कोरियाली सञ्चार माध्यमका अनुसार, नेता कीमले मुलुकको उत्तरमा निर्माणाधीन परियोजनाको निरीक्षणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उत्तर कोरियाको सकारात्मक पहललाई अझै बुझ्न नसकेको बताउनुभयो ।
विश्वभरबाट अन्नानको निधनप्रति शोक व्यक्त
स्वीजरल्याण्ड । पूर्व महासचिव कोफी अन्नानको शनिबार भएको निधनप्रति विश्वभरबाट दुःख व्यक्त गरिएका शोक सन्देशहरू प्राप्त भएका कोफी अन्नान फाउण्डेसनले जानकारी गराएको छ ।
मोदीद्वारा बाढी प्रभावितलाई राहतको घोषणा
केरला । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बाढी प्रभावितलाई राहत रकमको घोषणा गर्नुभएको छ ।
सन्त नेता वाजपेयीको अपरान्ह् ४ बजे अन्त्येष्टि
नयाँ दिल्ली । तीन पटक भारतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभएका अटल विहारी वाजपेयीलाई भारतीय नागरिकले राजनीतिक दलको नेता या भारतका पूर्वप्रधानमन्त्रीका रुपमा मात्र नभएर एकजना सन्त नेताका रुपमा पनि हेर्ने गर्छन् ।
अटल बिहारी बाजपेयीः जसले हारेको बाजी पनि जित्थे
सन् १९६३ मे को कुरा हो । मैले पहिलो पटक अटल बिहारी बाजपेयीलाई सुनेको थिएँ । पंडित दिनदयाल उपाध्याय जौनपुरबाट लोकसभाको चुनाव लडिरहेका थिए ।
अगष्ट ५ मा गएको भूकम्पले लियो ४६० जनाको ज्यान
जाकार्ता । मध्य इन्डोनेसियाको लोम्बोक द्वीपमा गत अगष्ट ५ मा गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ४६० पुगेको प्रकोप नियन्त्रण निकायका एक अधिकारीले बिहीबार जानकारी दिएका छन् ।
चीन, अमेरिका व्यापार वार्ता अगष्टको अन्त्यमा
बेइजिङ । चीनले व्यापार वार्ता पुनः सुरु गर्न अगष्टमा एकजना वरिष्ठ मध्यस्थकर्तालाई संयुक्तराज्य अमेरिका पठाउने चीनको वणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ । दुवै मुलुकबीचको व्यापार द्वन्द्व चर्किएपछिको यो पहिलो उच्चस्तरीय वार्ता हो ।
मलेसियाली अदालतले कीम जोङ हत्याको सुनुवाई गर्ने आदेश
क्वालालम्पुर । मलेसियाको एक अदालतले उत्तर कोरियाली नेता कीम जोङ उनका भाइ कीम जोङ नामको हत्या आरोपमा मलेसियामा पक्राउ परेका दुई महिलाका सम्बन्धमा सुनुवाई गर्न आदेश दिएको छ ।
कोरियाली नेतालाई रुसी राष्ट्रपतिको निमन्त्रणा
सोल । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन उत्तर कोरियाली किम जोङ उनसँग भेटघाट गर्न तयार हुनु भएको छ । पुटिनले छिटै किमसँग भेटघाट गर्नुहुने उत्तर कोरियाली सञ्चार माध्यमले बुधबार जानकारी दिएका छन् ।
देशैभर एकै पटक निर्वाचन सम्भव छैनः नितिश कुमार
पटना । एक राष्ट्र, एक निर्वाचन सैद्धान्तिक रूपमा ठीक हो तर व्यवहारिक रूपमा असम्भव विकल्प भएको बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले मङ्गलबार बताउनुभएको छ ।
अस्पतालमा आगलागी हुँदा नौ जनाको मृत्यु
ताइवान । ताइवानको राजधानी ताइपेईस्थित एउटा अस्पतालमा आगलागी हुँदा कम्तीमा नौ जनाको मृत्यु भएको अग्नी नियन्त्रकहरूले पुष्टी गरेका छन् ।
उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच सेप्टेम्बरमा सम्मेलन हुने
सोल । उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच आगामी सेप्टेम्बरमा सम्मेलन हुने भएको छ । दुई कोरियाबीच हालै भएको उच्चस्तरीय वार्तापछि सो सहमति भएको जनाइएको छ ।
मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर चिनीया सम्झौता तोड्ने प्रयासमा
मलेसिया । मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहमदले चिनीयाको सहयोगमा अघि बढाउन लागिएको अर्बौं डलरको पूर्वाधार परियोजना रद्द गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभएको छ । अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता रद्द गरी मुलुकलाई ऋणको बोझबाट मुक्त राख्ने प्रयासमा महाथिर हुनुहुन्छ ।
तालिवान समूहको आक्रमणमा परी १०० भन्दा बढीको मृत्यु
अफगानिस्तान । अफगानिस्तानको गजनी शहरमा तालिवान समूहद्वारा शुक्रबारदेखि शुरु गरेको आक्रमणमा परी एक सयभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले आइतबार जनाएका छन् ।
सूर्यको अध्ययनका लागि रकेट प्रक्षेपण
टाम्पा । अमेरिकी अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था (नासा) ले सूर्यको सतहको अध्ययनका लागि आइतबार एक अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरको महत्वाकाँक्षी एवं ऐतिहासिक अभियान सफल बनाउन अन्तरिक्ष रकेट प्रक्षेपण गरेको छ । यो अभियानले सौर्य आँधीको रहस्य पत्ता लगाउने अपेक्षा वैज्ञानिकहरुले गरेका छन् ।
इमरान खानको सपथग्रहण समारोहमा सिद्धु सहभागी हुने
भारत । भारतीय क्रिकेटका हस्ती नभजोत सिंह सिद्धु पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित इमरान खानको यही अगष्ट १८ तारिखमा हुने सपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुने भएका छन् ।
इन्डोनेसियामा हराएको विमान फेला, आठ जनाको मृत्यु
इन्डोनेसियामा शनिबार हराएको एक विमान दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको छ । साथै सो विमानमा सवार आठजना यात्रुको शव पनि भेटिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
ट्रम्पद्वारा ‘सबै प्रकारका जातिवाद’को निन्दा
वासिङ्टन । अमेरिकाको भर्जिनियास्थित चारलोटीभिल्लामा नव–नाजीहरूको हिंसात्मक प्रदर्शन भएको ठीक एक बर्षपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार आफू सवै किसिमको जातिवादको विरोधी भएको बताउनुभएको छ ।
इन्डोनेसियाको भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३८० भन्दाबढी
इन्डोनेसिया । इन्डोनेसियाको लोम्बोक द्वीपमा एक हप्ता अगाडि गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३८७ पुगेको छ ।
अमेरिकी प्रतिबन्धको उत्तर कोरियाद्वारा विरोध
सिओल । उत्तर कोरियाले केही उच्च अमेरिकी अधिकारीहरु प्योङयाङमाथिका प्रतिबन्धहरुलाई अझ सशक्त बनाउन लागिपरेको आरोप लगाउँदै यसबाट आणविक निःशस्त्रीकरणका कार्यक्रममा प्रगति हुन नसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
साना । उत्तरी यमनमा विद्रोहीको बलियो प्रभाव रहेको एक बजार इलाकामा साउदी अरेबियाआवद्ध क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा कम्तीमा २९ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ ।
कमल हसन राजनीतिमा आउने तयारी गर्दै
मुम्बइ । भारतीय फिल्म स्टार कमल हसन राजनीतिमा आउने तयारी गर्नु भएको छ ।
झण्डै आधा शताब्दीदेखि फिल्म क्षेत्रमा सक्रिय हसनले झण्डै २०० ओटा फिल्ममा काम गर्नु भएको छ । उहाँलाई भारतको फिल्म क्षेत्रमा सम्मानित दिइने व्यक्तिका रुपमा लिइन्छ ।
जातीय हिंसामा ११ जना मारिए
बामाको । मालीमा भएको जातीय हिंसामा परी ११ जना फुलानी नागरिक मारिएका छन् ।
स्थानीय समूहले बिहीबार मृत्यु हुनेहरूको संख्या ११ रहेको स्थानीय अधिकारीहरुले बताएका छन् । अशान्त रहेको मध्य क्षेत्र मोप्तीमा मंगलबार सो घटना भएको अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा जनाइएको छ । डोगोङ समुदायका व्यक्तिहरूले आक्रमण गरेको बताइएको छ ।
इन्डोनेसियामा शक्तिशाली परकम्प, ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३१९ पुग्यो
इन्डोनेसिया । इन्डोनेसियामा बिहीबार पुनः शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । यसै हप्तामा गएको यो तेस्रो शक्तिशाली भूकम्प हो ।
उत्तर कोरियाली हवाई सेवाको उडान थपियो
चीन । उत्तर कोरिया र चीनको उत्तरपूर्वी सहर सेनयाङबीचको प्रत्यक्ष हवाई उडानको संख्या पछिल्ला दिनहरुमा वृद्धि भएको छ । स्रोतका अनुसार दुई मुलुकबीचको मानव आवतजावतमा यसले वृद्धि गर्नेछ ।
क्यानाडेली सैनिक २४ वर्षपछि अफ्रिकी मिसनमा
माली । उत्तरी मालीको घाँसे मैदानमा प्रवेश गर्नुअघि नाइजर नदीको माथिमाथि उडान भर्दै एउटा क्यानाडेली दुई–इन्जिनयुक्त सैनिक हेलिकप्टर मालीको विद्रोही इलाकामा पहिलो पटक प्रवेश गरेको देख्न सकिन्थ्यो ।
मलेसियाली पूर्व प्रम रजाकलाई कालो धन थुपारेको आरोप
क्वालालम्पुर । मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री नजिब रजाकमाथि अरबौँ अमेरिकी डलर बराबरको रकम अपचलन गरेका नयाँ आरोप लागेको छ ।
खालिदा जियाको धरौटी सेप्टेम्बरसम्मका लागि थप
ढाका । बङ्गलादेशको राजधानी ढाकास्थित एक विशेष अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जियाको धरौटीलाई आगामी सेप्टेम्बर ५ सम्मका लागि थप गरेको छ ।
जम्मु काश्मिरमा ४ जना भारतीय सेनाको मृत्यु
श्रीनगर । भारतको काश्मिरको गुरेज क्षेत्रमा घुसपैठको आशंकामा भएको सैनिक कारबाहीका क्रममा एकजना सैनिक अधिकृत सहित चारजना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको छ ।
हप्ता दिनमा २० हजार अफगान शरणार्थी स्वदेश फर्किए– राष्ट्रसंघीय एजेन्सी
काबुल । अफगान शरणार्थीका रुपमा इरान र पाकिस्तानमा बस्दै आएका करिब २० हजार अफगान नागरिक गत हप्ता अफगानिस्तान फर्र्किएका छन् ।
७३ वर्षअघि जापानको हिरोसिमामा आणविक बम हमलाको यसरी स्मरण गरिँदै
टोकियो । जापानको हिरोसिमा शहरमा आजभन्दा ७३ वर्षअघि दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा विश्वमै पहिलो पटक भएको आणविक बम हमलाको सोमबार स्मरण गरिँदैछ । सोमबार बिहान हिरोसिमा शहरमा घण्टा बजेर उक्त नरसंहारको स्मरण गरिएको थियो । जापानभर आज उक्त नरसंहारको स्मरण गरिएको छ ।
आणविक निरस्त्रीकरणमा प्रतिबद्धता पूरा गर्न उत्तर कोरियासँग आग्रह
सिओल । दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरुको संगठन (आसियान) र अन्य १७ राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरुले उत्तर कोरियालाई आणविक निरस्त्रीकरणप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् ।
इन्डोनेसियामा शक्तिशाली भूकम्प, सुनामीको चेतावनी
इन्डोनेसिया । इन्डोनेसियाको लोम्बक टापूमा आइतबार ७ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको अमेरिकी भूगर्व विभाग (यूएसजीएस) ले जनाएको छ । एक हप्ता पहिले भूकम्पका कारण उक्त क्षेत्रमा रहेको पर्यटकीय टापू लोम्बकमा १७ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
इमरानलाई सोमबार प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरिने
इस्लामावाद । पाकिस्तानको तेहरीक–ए–इन्साफ (पिटीआई) का अध्यक्ष इमरान खानलाई भोलि (सोमबार) औपचारिक रुपमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरिने भएको छ ।
ड्रोन हमलामा बालबाल बचे भेनेजुएलाका राष्ट्रपति
भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो बिस्फोटकयुक्त ड्रोन हमलाबाट बालबाल बचेका छन् ।
भेनेजुएलाका अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति मादुरोले राजधानी कराकासमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिरहेका बेला उक्त ड्रोन बिस्फोट भएको हो ।
अफगानिस्तान । अफगानिस्तानको पूर्वी सहर गार्डेजमा भएका आत्मघाती हमलाम परी कम्तीमा ३५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
ह्वाइट हाउसः ट्रम्पलाई किम जोङ उनले पत्र लेखे
वासिङटन । अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले बुधबार नयाँ पत्र लेखेको जनाएको छ ।
जिम्बाबेको राष्ट्रपतिमा मान्गाग्वा विजयी
हरारे । जिम्बाबेको राष्ट्रपतिमा सत्तारुढ जानु–पिएफ पार्टीबाट उम्मेदवार रहेका वर्तमान राष्ट्रपति इमर्सन मान्गाग्वा विजयी हुनुभएको छ । पूर्व राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबेको लामो शासनकालपछि भएको पहिलो निर्वाचनमा इमर्सनको दलले संसदमा समेत बहुमत प्राप्त गरेको छ ।
क्यालिफोर्निया डढेलोबाट एक हजार घर नष्ट
संयुक्तराज्य अमेरिका । क्यालिफोर्नियाको जङ्गलको केही भागमा लागेको डढेलो दू्रत गतिमा सहरतर्फ फैलिएपछि एक हजारभन्दा बढी घर जलेर नष्ट भएको अधिकारीहरुले बुधबार जानकारी दिएका छन् ।
जिम्बाबेः मतगणनाको नतिजामा ढिलाई, राजधानीमा विरोध प्रदर्शन
हरारे । जिम्बाबेको राजधानी सहर हरारेमा बुधबार क्रुद्ध प्रदर्शनकारीहरुले ढुँगामुढा र सवारी साधनमा आगजनी गर्न थालेपछि सेना र प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न गोली चलाउनुका साथै पानीका फोहरा र आँशु ग्यास प्रहार गरेको छ । सेना र प्रहरीको हस्तक्षेपबाट कम्तीमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।
बङ्लादेशको सडकमा विद्यार्थीको आन्दोलन
ढाका । बङ्लादेशको राजधानी ढाकामा दशौँ हजार विद्यार्थीले बुधबार पनि सडकमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । आफ्ना सहपाठीको मृत्यु भएको विरोधमा उनीहरूले बुधबार चौँथो दिन सडक आन्दोलन गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।
अमेरिकी मध्यावधि चुनावलाई प्रभावित तुल्याउन फेसबुकको प्रयोग
न्यूयोर्क । अमेरिकी राजनीति र आगामी मध्यावधि निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउने गरी सम्भावित रुसीहरुले “गम्भीर” प्रयत्न गरेको तथ्य फेला परेको फेसबुकले जनाएको छ ।
दिल्ली होटेलबाट ३९ नेपाली महिलाको उद्धार
नयाँ दिल्ली । दिल्ली महिला आयोग (डिसीडब्लु) ले ३९ जना नेपाली महिलालाई एक होटलबाट मङ्गलबार राति उद्धार गरेको छ । नेपालबाट त्यहाँ पु¥याइएका ती महिलालाई दिल्लीको पहाडगञ्ज क्षेत्रमा रहेको एक होटेलमा राखिएको थियो ।
उच्च अदालतद्वारा शरीफको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्ने
इश्लामावाद । पाकिस्तानको उच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफद्वारा पुनरावेदन गरेको अभेनफिल्ड भ्रष्टाचार मुद्दामाथि मङ्गलबार सुनुवाई गर्ने भएको छ ।
सडक किनारमा रहेको बम विस्फोट
काबुल । अफगानिस्तानको दक्षिणी भागमा पर्ने फराह प्रान्तमा मङ्गलबार सडक किनारमा रहेको बम विस्फोट भएको छ । यसमा परी आठ व्यक्तिको मृत्यु हुनुको साथै अन्य ४० जना घाइते भएका स्थानीय अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
जापानाको फुकिशिमामा भूकम्प
टोकियो । जापानको फुकुशिमा प्रान्तमा ५।४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ ।
स्थानीय समयाअनुसार मङ्गलबार बिहान ५ः४२ बजे सो भूकम्प गएको जापानको मौसम विज्ञान निकायले जानकारी दिएको छ । यस भूकम्पको केन्द्रविन्दु तटिय क्षेत्रको जल सतहमा रहेको जनाइएको छ ।
म्यानमारमा पहिरोमा परेका २३ शव भेटिए
याङ्गुन । म्यानमारको काचिन राज्यमा गत साताको पहिरोमा परी हराइरहेका व्यक्तिमध्ये २३ जनाको शव भेटिएको उद्धारकर्ताहरुले जनाएका छन् । अविरल वर्षासँगैको पहिरोमा परेर २७ जना स्थानीयबासी पुरिएका थिए ।
इजरायली आक्रमणमा २ प्यालेस्टिनीको मृत्यु
संयुक्त राष्ट्रसंघ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनिओ गुटेर्रेसले मालीमा राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि शान्ति स्थापना गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । उहाँले निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा अहिलेसम्म देखिएको वातावरणबाट आफू उत्साहित भएको पनि बताउनुभएको छ ।
इजिप्टमा ७५ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय
इजिप्ट । इजिप्टको एक अदालतले मुश्लिम ब्रदरहुडका नेताहरूसहित विभिन्न ७५ जना अतिवादी इश्लाम धार्मिक अनुयायीहरूलाई मृत्यदण्डको फैसला सुनाएको छ ।
भारतमा बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या छ सय पुग्यो
इन्डोनेसियामा शक्तिशाली भूकम्प, १० को मृत्यु
जकार्ता । इन्डोनेसियाको लोम्बोक प्रायःद्वीपमा आइतबार बिहान गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण १० जनाको मृत्यु र ४० जना घाइते भएका छन् । बाली नजिकको लोकप्रिय पर्यटकीय गन्तव्य रहेको लोम्बोकमा ६।४ रिक्टर स्केलको भूकम्प गएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
नयाँदिल्लीमा भीषण वर्षा, यातायात प्रभावित
नयाँदिल्ली । भारतको राजधानी सहर नयाँदिल्लीमा दुई दिनदेखि भइरहेको लगातार वर्षाका कारण जताततै पानी जमेको र सवारी यातायात नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ ।
चिनियाँ र रुसी राष्ट्रपति भेटवार्ता
जोहानेसबर्ग । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच बिहीबार औपचारिक भेटवार्ता भएको छ ।
पूर्वक्रिकेट खेलाडी इमरान भावी प्रधानमन्त्रीको चर्चामा
काठमाडौँ । पाकिस्तानमा बुधबार भएको आमनिर्वाचनको मतपरिणामले पूर्वक्रिकेट खेलाडी इमरान खानलाई फेरी एक पटक चर्चाको शिखरमा पु¥याएको छ । सन् १९९२ मा भएको विश्वकप क्रिकेटको उपाधि कब्जा गर्न सफल पाकिस्तानी टिमको नेतृत्व गरेका विश्व चर्चित खान अहिले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदाएपछि फेरी चर्चाको शिखरमा पुग्नुभएको छ । खान नेतृत्वको टोलीले नै पाकिस्तानलाई पहिलो पटक विश्वकप क्रिकेटको उपाधि दिलाउन सफल भएको थियो ।
पाकिस्तान मतगणनाः पूर्व क्रिकेटर खानको प्रारम्भिक अग्रता
लाओसमा १३१ जना अझै बेपत्ता रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई
लाओस । लाओसका प्रधानमन्त्री थोङलोन सिसौलिथले बाँध भत्कीएर बगाएकामध्ये १३१ जना अझै पनि बेपत्ता भएको बताउनुभएको छ । देशको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको हाइड्रो पावरको बाँध भत्कीएर बगाएका वा बेपत्ता भएकामध्ये १३१ जनाको अवस्था अझै थाहा पाउन नसकिएको उहाँले बुधबार बताउनुभएको हो ।
पाकिस्तानमा मतदान सुरु
इस्लामावाद । राष्ट्रिय सभा, संसदको तल्लो सदन र चारवटा प्रान्तीय विधान सभाको निर्वाचनको लागि पाकिस्तानमा मतदान हुँदैछ । संसदीय निर्वाचनको लागि कडा सुरक्षाबीच मतदान हुँदैछ ।
हाइड्रोपावरको बाँध भत्कीँदा सयौँ बेपत्ता
बैंकक । दक्षिणपूर्व लाओसमा निर्माणाधीन एउटा हाइड्रोपावरको बाँध भत्कीँदा सयौँ बेपत्ता भएका छन् । घटनामा परी मृत्यु हुनेहरूको संख्या यकिन हुन नसकेको अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले रोहिंग्या समस्या समाधानका लागि म्यानमार सरकारलाई आग्रह गरेको छ । म्यानमारको एक अल्पसङ्ख्यक जातीय समूह रोहिंग्यामाथि म्यानमारको सेनाले ज्यादति गरेपछि देश छोडेर भागी बङ्गलादेशमा रहेका छन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रिकामा
प्रिटोरिया । चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ सोमबार दक्षिण अफ्रिका पुग्नुभएको समाचार छ । उहाँ सोमबार दक्षिण अफ्रिकाका पुग्दा यहाँका उच्चस्तरीय अधिकारीहरुले प्रिटोरिया विमानस्थलमा विशेष तथा भव्य स्वागत गरेका थिए ।
उत्तर कोरियासँगको वार्तापछिको प्रगतिप्रति ट्रम्प “अत्यन्त खुशी”
वासिङटन । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियासँगको वार्तापछि भएको प्रगतिबाट आफू “अत्यन्त खुशी” भएको बताउनुभएको छ ।
विमानस्थलनजिकै आत्मघाती आक्रमण
काबुल । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनजिकै एक आत्मघाती आक्रमण भएको छ । विमानस्थलको प्रवेशद्वारमा भएको यस आक्रमणमा ज्यान गुमाउने व्यक्तिको सङ्ख्या २३ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार जानकारी दिएको छ ।
लागुऔषध कारोबारमा संलग्न पाकिस्तानी नेतालाई आजन्म काराबास
एकै परिवारका नौ व्यक्तिले ज्यान गुमाए
वासिङ्टन । अमेरिकाको मिसौरी राज्यमा रहेको एक तालमा गत बिहीबार भएको डुङ्गा दुर्घटनामा एकै परिवारका नौ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ ।
जापानमा बाढीपछि गर्मी, तातो हावाले ३० जनाको मृत्यु
टोक्यो । जापानमा अत्यधिक गर्मीका कारण ३० जनाको ज्यान गएको सरकारी अधिकारीहरुले आइतबार जानकारी दिएका छन् । केही दिनयता यहाँको तापक्रम अनासायै बढेपछि व्यक्तिहरुलाई अनावश्क रुपमा घाममा नजान देशभर सूचना जारी गरिएको छ ।
दक्षिण कोरियाली पूर्वराष्ट्रपतिलाई थप आठ वर्ष जेल सजाय
सोल । दक्षिण कोरियाली पूर्वराष्ट्रपति पार्क गेउन हाइलाई थप आठ वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ । सोलस्थित एक अदालतले शुक्रबार उहँलाई यसअघि दिइएको सजायमा आठ वर्ष थपिएको हो । उहाँले गरेको भनिएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका क्रममा यो सजाय थपिएको हो ।
अमेरिकाको मिसौरीमा डुङ्गा दुर्घटना, ११ को मृत्यु, पाँच बेपत्ता
वासिङ्टन । अमेरिकाको मिसौरी राज्यमा रहेको एक तालमा बिहीबार पर्यटक बोकेको डुङ्गा दुर्घटना हुदा त्यसमा रहेका कम्तीमा पनि ११ जनाको ज्यान गएको छ । यस दुर्घटनामा परी कम्तीमा एघार व्यक्तिको मृत्यु भएको र अरु पाँच जना हराएका स्थानीय अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई अमेरिका भ्रमणको निम्तो
ट्रम्पप्रति पुटिनको आशंका
मस्को । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अमेरिकी समकक्षी डोनाल्ड ट्रम्पप्रति आशंका व्यक्त गर्नु भएको छ ।
डुङ्गा दुर्घटना हुँदा १६ को मृत्यु, ३० बेपत्ता
इस्तानबुल । शरणार्थीहरू चढेको डुङ्गा दुर्घटना हुँदा बुधबार साइप्रसमा कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु भएको छ । साइप्रसको उत्तरी क्षेत्रमा भएको दुर्घटनामा परी अरू ३० जना यात्रु बेपत्ता भएको स्थानीय सुरक्षा अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
पुटिन र ट्रम्पबीच आज वार्ता हुँदै
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच सोमबार हेल्सिन्कीमा द्विपक्षीय वार्ता हुने भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटवार्ताका लागि फिनल्याण्ड आइपुगेका छन् । उनीहरुबीचको भेटवार्तालाई विश्वका सञ्चारमाध्यमहरुले पनि निकै प्रचार गरिरहेका छन् ।
एकै परिवारका छ जना मृत फेला
भारत झारखण्डमा एकै परिवारका ६ जना मृत फेला परेका छन्।
झारखण्डको हजारीबाग शहरका एक व्यवसायीको सबै परिवारका सदस्यको शव घरभित्रै फेला परेको हो। घरबाट ६ वटा सुसाइड नोट पनि फेला पारेको झारखण्ड प्रहरीले जनाएको छ। रातो रंगको कागजमा रहेको सबै ुसुसाइड नोटुमा आफूहरुले स्वेच्छाले आत्महत्या गरेको उल्लेख गरिएको जनाइएको छ। यद्यपि, बच्चाको भने घाँटी रेटेर हत्या गरिएको उल्लेख छ। सबै शव घरको विभिन्न स्थानमा फेला परेका थिए।
कुटनीतिक तनावबीच पुटिन र ट्रम्प हेलसिन्कीमा शिखर सम्मेलन गर्दै
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच आगामी सोमबार द्विपक्षीय वार्ता हुने भएको छ। सोमबार फिनल्यान्डको हेलसिन्की हुन लागेको शिखर सम्मेलनका क्रममा उनीहरूबीच वार्ता हुने कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ।
जापानमा वर्षाबाट मृत्यु हुने २०४ जना, प्रधानमन्त्री प्रभावित क्षेत्रमा
टोकियो । जापानमा भारी वर्षा र बाढीका कारण शुक्रबार बिहानसम्म २०४ जनाको मृत्यु भएको समाचार छ ।
जापान सरकारका प्रवक्ता यासिहिदे सुगाले शुक्रबार बिहान सो जानकारी गराउनुभएको छ । यसमा परेर २८ जना व्यक्ति हराइरहेका छन् ।
ट्रम्पले सार्वजनिक गरे उनले पठाएको चिठी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाका नेता किम जोन उनले लेखेको चिठी सार्वजनिक गरेका छन्।
विश्व सैन्य खर्च दोब्बर बनाऊः ट्रम्प
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) सम्मेलनमा कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीको ४ प्रतिशत सैन्य खर्च गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्।
१३ को उद्धार गर्ने गोताखोरको विश्वभर प्रशंसा, अभिभावकले अझै पाएनन् भेट्न
पाकिस्तानमा आत्मघाती आक्रमण, एनपीएका नेतासहित १४ को मृत्यु
पाकिस्तानको पेशावरमा गराइएको आत्मघाती बम विस्फोटमा अवामी नेसनल लिग एनएपीका नेता हारुन बिलौरसहित कम्तीमा १४ जनाको मृत्यु भएको छ।
मस्कोमा पर्यटकको घुँइचो, ६० लाखले भ्रमण गरे
विश्वकप फुटबलको रौनकले अहिले रसिया पुरै छोपिएको छ । विश्वकप फुटबलमा अप्रत्यासित नतिजा एकातिर रहँदा रसियाले भने विश्वकपमा एक नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ ।
जापानको सामुन्द्रिक टापु होन्सुमोमा भीषण वर्षपछि बाढीपहिरोका कारण ३८ जनाको मृत्यु
जापान । जापानमा भीषण बर्षापछि आएको बाढीपहिरोका कारण ३८ जनाको मृत्यु भएको छ ।
मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार काण्डमा पक्राउ
क्वालालम्पुर । मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री नाजिव रज्जाक पक्राउ परेका छन् । भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने निकायले उनलाई मंगलबार पक्राउ गरेको दि सिड्नी मर्निङ हेराल्डले जनाएको छ ।
आठ देशका नागरिक अमेरिका जान नपाउने नै भए
वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जोड गर्दै आएजस्तै मुस्लिम वाहुल्य देशसहित विभिन्न ८ देशका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लागेको छ ।
मालदिभ्समाथि भारतको अघोषित नाकाबन्दी
काठमाडौं । दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने भारतीय स्वार्थको मार मालदिभ्समा देखिएको छ ।
चीनमा एकैपटक तीन कम्युनिस्ट सरकार प्रमुखको उपस्थिति
काठमाडौं । उत्तरी छिमेकी देश चीनमा एकै पटक तीन मुलुकका कम्युनिष्ट शासकहरु पुगेका छन् ।
ट्रम्प र किमद्वारा संयुक्त दस्तावेजमा हस्ताक्षर
काठमाडौं । मंगलबार बिहान सिंगापुरमा सम्पन्न ट्रम्प–किम वार्तामा संयुक्त दस्तावेजमा हस्ताक्षर भएको छ ।
विश्वकप फुटबल कुन–कुन समयमा खेलिदैछ हेर्नुहोस्
मस्को । फुटबलको कुम्भ मेला ‘फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता २०१८’ आउँदो जेठ ३१ गतेबाट रसियामा सुरु हुँदैछ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र कोरियाली नेता किमबीच सेन्तोषा टापुमा भेटवार्ता हुने
काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ ऊनबीच आगामी साता हुने भनिएको बहुप्रतिक्षित भेटवार्ता लागि स्थान तय भएको छ ।
अमेरिकालाई एक्ल्याउने जि सेभेनका अर्थमन्त्रीहरुको चेतावनी
क्यानाडा । स्टील र एलुमिनियममा कर लगाउने अमेरिकी सरकारको निर्णयका विरुद्धमा युरोपेली युनियन आवद्ध अर्थमन्त्रीहरु एक भएर प्रतिकारमा उत्रिएका छन् ।
२०२२ मै विश्वकै ठूलो उभयचर विमान आपूर्ति हुने
बेइजिङ । चीनले विश्वकै ठूलो उभयचर विमान (जल र थल दुवैमा अवतरण र उडान भर्ने) आगामी २०२२ मा उपभोक्तालाई आपूर्ति गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।
उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच ऐतिहासिक शिखर वार्ता सुरु
सोल । दुई कोरियाबीच ऐतिहासिक शिखर वार्ता सुरु भएको छ। उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उन र दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जाई इन वार्तामा बसेका छन्। वार्ताअघि दुई नेताबीच कोरियाली प्रायद्वीपलाई विभाजन गर्ने सीमारेखा नजिक भेट भएको हो ।
युइस बंगालको अर्को विमानबाट बंगलादेशका घाइते तथा मृतकका आफन्त नेपाल आउँदै
काठमाडौं । विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका बंगलादेशी नागरिकहरुको घाइते तथा मृतकका आफन्त बोकेको युएस–बंगलाको विमान नेपालका लागि उडेको बताइएको छ ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नेपाल आउने
काठमाडौं । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहीद खाकान अब्बासी दुईदिने नेपाल भ्रमणमा आउन भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलार्इ बधार्इ दिनका लागि उनी नेपाल आउन लागेको बताइएको छ ।
सिरियामा युद्धविराम गर्न राष्ट्रसंघको पुनः आग्रह
सिरियाको राजधानी दमासकसको नजिकै रहेको गुटा नगरमा जारी आक्रमण अत्यन्तै क्रुर रहेको र यसबाट सयौँ सर्वसाधारण र बालिबालिका पनि परेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले तत्कालै युद्धविरामको लागि पुनःआग्रह गरेको छ ।
६६ जना यात्रु बोकेको विमान दुर्घटना
तेहरान । इरानको राजधानी तेहेरानबाट यासुजका लागि उडेको एक यात्रुवाहक विमान इस्फान प्रान्तको सेमीरोममा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ ।
भारतमा २४.४२ लाख करोड भारुको बजेट प्रस्तुत
नेपालका छिमेकी देश भारत तथा विश्वमा द्रुत गतिको आर्थिक विकासमा अगाडि बढाइरहेको आर्थिक शक्ति भएको देश भारतले बिहीबार २४ दशमलव ४२ लाख करोडको बजेट सार्वजनिक गरेसँगै यसका छिमेकी मुलुकसहित विश्व आर्थिक क्षेत्रमा विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ ।
अमेरिकी बजेट विवादले नेपालको अमेरिकी पुस्तकालय बन्द
काठमाडौं । अमेरिकी सरकारको बजेट पारित नहुँदाको असर नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासमा समेत देखिएको छ । दूतावास पूर्ण रूपमा बन्द भइनसके पनि दूतावासले प्रवाह गर्दै आएका केही कार्य रोकिएको छ ।
खर्च विधेयक असफलपछि अमेरिकी संकट गहिरियो
वासिङ्टन। अमेरिकी माथिल्लो सदन (सिनेट) सरकारको खर्चसम्बन्धी विधेयक विफल बनाएको भन्दै अमेरिकी सिनेटको आलोचना गरेका छन् ।
को हुन् चार्ली च्याप्लिन, किन चिहानबाटै चोरी भएको थियो लाश
एजेन्सी । चलचित्रकर्मी तथा अभिनेता चार्ली च्याप्लिनको आइतबार (१६ अप्रिल)मा जन्मजयन्ती परेको थियो। चलचित्र जगतमा चार्ली च्याप्लिनको नाम अमर छ। उनको जन्म १६ अप्रिल, १८८९ मा बेलायतको लण्डनमा भएको थियो। च्याप्लिनका बारेमा केही रोचक तथ्य, जुन तपाईंका लागि रमाइला लाग्न सक्छन्। चार्ली च्याप्लिनको निधन ८८ वर्षको उमेरमा सन् १९७७ मा क्रिसमसका दिन भएको थियो।
अमेरिकालाई उडाउने परमाणु बमको स्वीच सधैं मेरो टेबुलमा हुन्छ : किम
सियोल । उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले अमकेरिकालाई चेतावनी दिँदै परमाणु बम प्रहार गर्ने स्वीच सधैं आफ्नो डेस्कमा रहेको बताइएको छ ।
काठमाडौं । भारतले बेलायत र फ्रान्सलाई पछि पार्दै सन् २०१८ विश्वकै पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने मङ्गलबार सार्वजनिक एक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । भारत अहिलेसम्म विश्वको सातौँ ठूलो अर्थतन्त्र रहेको भएपनि सन् २०१८ मा दुईस्थान माथि चढ्दै पाँचौँ स्थानमा पुग्न देखिएको लण्डनस्थित आर्थिक तथा व्यवसायिक अनुसन्धान केन्द्र (सेन्ट्रल फर इकोनोमिक्स एण्ड विजिनेस रिसर्च) द्वारा जारी बार्षिक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
चीनले विश्वकै ठूलो विमान बनायो
एजेन्सि । चीनले विश्वकै ठूलो एंफिबियस विमान बनाएको छ । यो विमानले आइतबार उडान भरेको छ । यो एंफिबियस विमानको नाम कुनलङ राखिएको छ । यो विमानले दक्षिण–चीन सागरको विमानस्थलमा आइतबा आफ्नो पहिलो उडान भरेको छ । उडान सफल पनि भएको बताइएको छ ।
अब उत्तर कोरिया परिवर्तन हुँदै गएको हो
एजेन्सी । उत्तर कोरियाका नेता किम जङ–अनको जन्मदिनबारे सन् २०१८ को उनकै देशको भित्तेपात्रोमा उल्लेख नगरिनु र उनका परिवारको फोटा नराखी अन्य दृश्य राख्नुलाई परिवर्तनको रुपमा हेरिएको छ ।
उत्तर कोरियका आणविक हतियार बेच्ने नागरिक अष्ट्रेलियामा पक्राउ
सिड्नी । एकजना उत्तर कोरियाली नागरिक आणविक हतियार र यसका पार्टपूर्जाहरु बेच्ने क्रममा सिड्नीमा पक्राउ परेका छन्। उनले उत्तर कोरियामा आणविक हतियारको विकासका लागि रकम जुटाउने उद्देश्यले प्रतिबन्धित आणविक शस्त्र र यसका पार्टपूर्जाहरु बेच्ने गरेका थिए।
विश्वका शक्तिशाली मानिएका देशहरुले किन चन्द्रमामा मानवयान पठाउन छाडे
काठमाडौं । चन्द्रमामा पहिलो पटक पाइला टेक्ने मानिस निल आर्मस्ट्रङ्ग हो भन्ने कुरा त प्रायजसो सबैलाई थाहा नै छन् । उनि सन् १९६२ को जुलाई २१ मा चन्द्रमामा पाइला टेकेर इतिहास रचेका थिए । आर्मस्ट्रङ्ग पछि पाँचजना अरु अमेरिकी अन्तरीक्षयात्रीहरु चन्द्रमामा पुगिसकेका छन् ।
बर्हिगमनका लागि भएको सम्झौता वार्ता सहमति नजिक
ब्रसेल्स । युरोपियन युनियन (इयु) र बेलायतबीच बेलायतको इयुबाट बर्हिगमनका लागि सम्बद्ध पक्षबीच भएको सम्झौतावार्ता सहमति नजिक पुगेको इयु प्रमुख डोनाल्ड टस्कले बताएका छन् ।
खोसियो आङसाङ सुकीको पदक
म्यानमारकी नेतृ आङ सान सू चीलाई दिइएको ‘फ्रीडम अफ द इंग्लिश सिटी अफ अक्सफर्ड’ सम्मान फिर्ता लिइएको छ।
बुवाआमा भेट्न बसको तल बसेर ८० किलोमिटर यात्रा
चीनका दुई बालकले आफ्ना अभिभाव भेट्नका लागि बसको तल (चक्काको छेउ) मा लुकेर ८० किलोमिटर यात्रा गरेका छन् । बसको तल लुकेर यात्रा गरेका बालकको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि चीनमा बालबालिकाको अधिकारी तथा उनीहरुको सुरक्षाको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्चालमा चर्चा सुरु भएको छ ।
नाकाबन्दीको चपेटमा रहेको कतारको अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धि
दोहा। कतारको आर्थिक बृद्धिदर तीव्र गतिले भइरहेको कतारको केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले बताएका छन्। गभर्नर सेख अब्दुल्लाह विन साउड अल थानीले खाडी सहयोग परिषद् (जिसीसी)मा पर्ने देशहरु मध्ये पनि कतारमा सवै भन्दा धेरै आर्थिक बृद्धि भईरहेको जानकारी दिए।उनको भनार्इ उद्धृत गर्दै कतार समाचार संस्थाले कतारका छिमेकी देशहरुले नाकाबन्दी गरिरहेका बेलामा पनि तीब्र आर्थिक बृद्धि भईरहेको उल्लेख ।
राष्ट्रपतिबाट हटे पनि मुगाबेले मासिक डेढ लाख डलर तलब पाउने
काठमाडौं । ​जनताबाट धेरै विरोध र सैनिकले नजरबन्द गरेपछि राजीनामा दिएका जिम्वाबेका शासक रोर्बट मुगाबेलाई सरकारले बाँचुञ्जेल मासिक डेढ लाख डलर तलब दिने भएको छ । यो उनले राष्ट्रपति हुँदा पाइरहेको तलब बराबर हो।
यूरोपको अर्थतन्त्रमा चमत्कारीक सुधार, रोजगारीको अवसरै अवसर
ब्रसेल्स। यूरोपमा यो नोभेम्बरमा व्यापारिक गतिविधिमा व्यापक वृद्धि भएको एक महत्वपूर्ण सर्वेक्षणको बिहीबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
३७ वर्षे राष्ट्रपति शासन ढल्यो
काठमाडौं । विगत ३७ वर्षदेखि जिम्बावेमा शासनका पर्याय बनेका जिम्वावेका राष्ट्रपति रोबर्ट मुगावेको शासन ढलेको छ । मंगलबार मुगावेले आफै राजिनामा दिएपछि उनको ३७ वर्षे शासन आफ्नो ९३ वर्षको उमेरमा पूर्णविराम लागेको हो । गतहप्ता मात्र त्यहाको सेनाले राष्ट्रपतिलाई आफ्नो कब्जामा लिएको सेनाले घोषणा गरेको थियो ।
कतारमा न्यूनतम तलब ७ सय ५० रियाल तोकियो
दोहा । आप्रवासी कामदारमाथि शोषण भएको भन्दै विभिन्न मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले आलोचना गरिरहेका बेला कतार सरकारको श्रम मन्त्रालयले पहिलोपटक मासिक न्यूनतम तलब ७ सय ५० रियाल तोकेको छ ।
गुगल विश्वकै मूल्यवान् ब्रान्ड
काठमाडौं । विश्वप्रसिद्ध कम्पनी गुगल सर्वाधिक मूल्यवान् ब्रान्ड बन्न सफल भएको छ । यसै साता ब्रान्ड फाइनान्सले विश्वका सर्वाधिक मूल्यवान् पाँच सय ब्रान्डका सफल कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेको हो । विश्वको सर्वाधिक मूल्यवान् ब्रान्ड गुगल कम्पनी पहिलो नम्बरमा छनोट भएको छ ।
सुरुङ खनेर बैंकमा चोरी
मुम्बई । भारतको मुम्बईमा चार महिना लगाएर २५ फुट लामो सुरुङ खनेर बैंक चोरी भएको छ । मुम्बईको बैंक अफ बडौदामा चोरहरु उक्त सुरुङबाट शनिबार नगद तथा गरगहाना चोरेर फरार भएको हो ।
अमेरिकामा अज्ञात बन्दुकधारीको गोली प्रहारबाट २६ जनाको मृत्यु
एजेन्सी । अमेरिकाको सदरल्याण्ड स्प्रिङ्गस्थित एउटा चर्चमा आइतबार बिहानको प्रार्थनाको समयमा २६ जनाको ज्यान लिने गरी ठुलो हत्याकाण्ड भएको बताइएको छ। यस दुर्घटनालाई पनि अमेरिकाको इतिहासको सबैभन्दा दर्दनाक नंरसहार भनिएको छ। उक्त दुर्घटनामा २६ जना मारिएका छन् भने अरु २० जना गम्भीर घाइते भएका छन्।
साउदी राजकुमारको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु
एजेन्सि। साउदी अरबका राजकुमारको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ । यमनको सीमा क्षेत्रमा पर्ने आभा शहर नजिक हेलिकोप्टर दुर्घटना हुँदा राजकुमार मन्सुर बिन मुकरिनको मृत्यु भएको हो ।
टाउको जोडिएका जुम्ल्याहाको शल्यक्रिको चार दिनपछि एक बच्चाको होस खुल्यो
भारतमा टाउको जोडिएर जन्मिएका नाबालकको टाउको छुटाउन भएको शल्यक्रियाको चौथो दिन एक बालकले आँखा खोलेको उपचारमा संलग्न डाक्टरले बताएका छन्। जागा नाम गरेका बालकले आँखा खोलेको र सामान्य खालका प्रतिक्रियाहरु जनाएको बताएका हुन्।
अफगानिस्तानको कडा सुरक्षा कारबाहीमा ४६ जनाको मृत्यु
काबुल । अफगानिस्तानमा सुरक्षाकर्मीको कारबाहीमा परी कम्तीमा ४६ जना लडाकूको मृत्यु भएको छ । घटनामा परी अन्य १८ जना घाइते भएको रक्षा मन्त्रालयले सोमबारी जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
जापानी राजकुमारीले एक सामान्य युवकसँग विवाह गर्ने
टोकियो । जापानी राजकुमारी माकोले एक सामान्य युवकसँग विवाह गरी शाही सुख भोगलाई तिलान्जली दिने भएकी छिन् ।
चिन र भारतबिचको दोक्लाम विवाद अन्त्य
भदौ १२, काठमाडौं । भारतीय विदेश मन्त्रालयले सोमबार बिहान विज्ञप्ति जारी गर्दै चीन–भुटान सीमाको दोक्लाममा जारी तनाव अन्त्यतिर उन्मुख भएको भारतले बताएको छ ।
पुन आक्रमण हुनबाट रोक्यो स्पेनिस पुलिसले
भदौ २, काठमाडौं । क्रमणकारीलाई मारेर क्याम्ब्रिल्समा सम्भावित आक्रमणमा रोकेको स्पेनिस पुलिसले बताएको छ । क्याम्ब्रिल्स बन्दरगहा नजिकै गोली चलेको आवाज सुनिएको छ । लगतै प्रहरीले मानिसहरुलाई सडकबाट टाढा रहन चेतावनी दिएको बीबीसीले जनाएको छ ।
देशको सार्वभौमसत्ता जोगाउन सेनाले जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार : चिन
बेइजिङ । देशको सार्वभौमसत्ता जोगाउनका लागि चिनियाँ सेना जुनुसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । दोक्लम विवाद समाधानका लागि चीन सरकारले देशको हितलाई ध्यानमा राखेरमात्र भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्ने विदेश मन्त्रालयद्वारा विज्ञप्तीमा उल्लखे छ।
कतारका विदेशमन्त्री पत्र लिएर पुगे कुवेत
कुबेत। कतारका विदेशमन्त्रीले साउदी अरेबियासहितका खाडी मुलुकले अघि सारेका मागहरुबारे आफ्नो अडानसहित कुवेत पुगेका छन् ।
भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीबिच भेट
जेठ २६, नयाँ दिल्ली । भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीबीच गएको १७ महिनापछि पहिलो पटक कजाकिस्तानमा भेट भएको छ । गएको १७ महिनापछि पहिलो पटक उहाँहरुबीच भेटघाट भएको जनाइएको छ ।
कतारले आत्मसमर्पण नगर्ने
जेठ २६, काठमाडौं । साउदी अरेबिया सहित आफ्ना अरब छिमेकी देशहरुबाट नाकाबन्दी बेहोरिरहेको कतारले दबाबका सामु आफ्नो विदेश नीति उसकै शब्दमा ‘आत्मसमर्पण’ नगर्ने जनाएको छ।
सैनिक विमानको भग्नावशेष र शव फेला
१२२ यात्रु बोकेको सैनिक विमानको भग्नावशेष र शव फेला परेको बर्मेली सैनिकले जानकारी दिएको छ ।
कतारलाई किन एक्ल्याइयो
काठमाडौं । इस्लामिक स्टेट (आईएस) सहितका लडाकु समूहलाई सहयोग गरेको र क्षेत्रीय तथा आपसी मतभेद बढाउने गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै ७ मुलुकले कतारसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन् ।
भारत उत्तरप्रदेशमा भयानक दुर्घटना, बसभित्रै जले २० यात्रु
जेठ २२, काठमाडौं । भारत उत्तर प्रदेशको बरेलीमा ट्रक र बस ठोक्किएर आगलागी हुँदा २० जनाको मृत्यु भएको छ । १५ जना घाइते भएका छन् । गएराति एक बजे यूपी रोडवेजको बस ट्रकसँग ठोक्किएपछि आगो लागेको थियो । आगो यति ठूलो थियो कि बसका सबै यात्रुहरु बाहिर निस्किनसमेत पाएनन् । २० जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । आगलागी सुरु भएको करिब २०÷२५ मिनेटपछि घटनास्थलमा दमकल पुगेको थियो । आगो निभाउन्जेल बस र ट्रक पूरै जलिसकेका थिए ।
जापानी परिवारमा आर्थिक संकट आउन सक्ने
जापान । जापानका निजि वौद्दिक जमातले सन् २०३५ पछी जापानको एक चौथाई वृद्द परिवारमा आर्थिक कठिनाईको समस्या आईपर्ने विश्लेषण गरेका छन् ।
उत्तर कोरियाप्रति आक्रमक बन्दै अमेरिका र चीनसँगै अघि बढ्ने
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तथा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ्गबीच आज बिहान टेलिफोन वार्ता भएको छ ।
साउदी राजाको एसिया भ्रमणमा १५ सय मान्छेसहि ६ वटा बोइङ प्यासेन्जर जेट
२० फाल्गुन । आर्थिक सम्बन्ध बढाउने उद्देश्यले एक महिने लामो एसिया भ्रमण थालेका साउदी अरेबियाका राजा सलमान बुधबार इन्डोनेसिया पुगेका छन् ।
२०१८ का लागि रक्षा खर्चमा ५४ अर्ब डलर बृद्धि गर्ने ट्रम्पको घोषणा
फागुन १७, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सुरक्षा खर्चमा भारी बृद्धि गर्ने बताएका छन् । उनले २०१८ का लागि आफ्नो प्रस्तावित बजेटमा रक्षा खर्चमा ५४ अर्ब डलर बृद्धि गर्न चाहेका छन्, जुन कुल रक्षा खर्चको लगभग ९ प्रतिशत हो ।
भारतको ‘गोप्य आणविक सहर’
माघ २८, पाकिस्तान । पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले बिहीबार सञ्चारमाध्यमसँगको नियमित कुराकानीमा भारतले ‘गोप्य आणविक सहर’ निर्माण गर्न लागेको दाबी गरेको छ ।
नाक उठाएरै पोखरीमा खसेका व्यक्तिले घण्टौंसम्म ज्यान बचाए
माघ २८ । अष्ट्रेलियाका एक व्यक्तिले पोखरीमा खसेपछि निकै मुश्किलले आफ्नो ज्यान बचाएका छन् ।
विश्वको सबै भन्दा महंगो भवन बिक्रिमा
अमेरिकाको लस एल्जलसमा रहेको संसारको सबैभन्दा भहंगो घर बिक्रिमा राखिएको छ। अहिले सम्मकै सबैभन्दा महंगो मुल्यमा राखिएको उक्त भवनको मुल्य २ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ। यसको नेपाली मुल्य २ खरब ५० अरब भन्दा बढी हुन्छ।
ट्रम्पलाई सल्लाहकारको सुझाब :पाकिस्तानविरुद्ध कठोर नीति लिनुपर्छ
माघ २६, काठमाडौं । वाशिङटनका मुख्य थिंक ट्याङ्कहरुले दक्षिण एशियाली मुस्लिम बहुल राष्ट्र पाकिस्तानप्रति कठोर नीति अख्तियार गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई सुझाव दिएका छन् । यस सम्वन्धमा उनीहरुले राष्ट्रपतिलाई १८ पन्ने गोप्य रिपोर्ट बुझाएका छन् ।
सार्क बैठक भोलि काठमाडौंमा
माघ १८, काठमाडौं । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन ९सार्क० कार्यक्रम समितिको ५३औँ बैठक बुधबार काठमाडौंमा बस्दैछ।
ट्रम्पको निर्णय गैरकानुनी : राष्ट्रसङ्घको
माघ १८, जेनेभा । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवअधिकार प्रमुख जैयद विन राद जैयद अल हुसैनले अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा अमेरिका भ्रमणमा खासगरी इस्लामिक मुलुकका विदेशीलाई लक्षित गरी लगाइएको प्रतिबन्ध गैरकानुनी भएको बताउनुभएको छ ।
आमा छोरीको रहस्यमय मृत्यु
माघ १७, मेलवर्न । अष्ट्रेलियाको मेलवर्नमा एक नेपाली महिला र उनकी ३ वर्षीया छोरीको रहस्मय मृत्यु भएको छ । घटनाका सम्वन्धमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
अमेरिकाबाट मुस्लिम शरणार्थी फिर्ता गर्ने ट्रम्पको निर्णयमा अदालतको झड्का
माघ १६, काठमाडौं । अमेरिकामा रहेका शरणार्थीहरुलाई निर्वासित गर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको फैसलालाई एक अदालतले रोक लगाएको छ । यद्यपि यो अदालती रोक अस्थायी हो । द अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज युनियन (एसीएलयू)मा ट्रम्पको आदेशविरुद्ध शनिबार उजुरी परेको थियो ।
ट्रम्पले बनाउने पर्खालको खर्च नबेर्होने मेक्सिको राष्ट्रपतिको घोषणा
माघ १३, काठमाडौं । अमेरिकाले मेक्सिकोको सीमा क्षेत्रमा बनाउने भनिएको पर्खालको खर्च नव्यहोर्ने मेक्सिकोले घोषणा गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार मेक्सिकोको सीमामा पार गर्न नसकिने पर्खाल बनाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो पर्खाल बनाउन लाग्ने अर्बौं रकम मेक्सिको सरकारले व्यहोर्नु पर्ने उनले बताएका छन् ।
ट्रम्पको निर्णयले नेपाल आउने सहयोग कटौती
माघ ११, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सुरक्षित गर्भपतन गराउने र त्यससम्वन्धी सूचना दिने गैरसरकारी संस्थाहरुलाई दिने सहयोगमाथि प्रतिवन्ध लगाएका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्नेछ । राष्ट्रपतिको पदभार सम्हालेको पहिलो दिन सोमबार ट्रम्पले कार्यकारी आदेश जारी गरेका हुन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अमेरिका विश्वकै ठूलो दातृ निकाय हो । उसले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग यूएस एआईडीमार्फत मात्र ३ अर्ब डलर खर्च गर्छ ।
ओबामाको बिदेश नितीमा ट्रम्पको झड्का, टिपीपी बाट बाहिर निस्कने आदेशमा हस्ताक्षर
माघ ११, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यापार सम्झौता ‘ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरशिप’ (टीपीपी) बाट बाहिर हुने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो ब्यापार सम्झौतालाई पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाको एसिया नीतिको प्रमुख आधार मानिएको थियो ।
भारतको कानपुरमा रेल दुर्घटना गराउने मुख्य योजनाकार नेपाली, आइएसआईको संलग्नता
बिहार प्रहरीले गत नोभेम्बर २० मा कानपुरको पुखराया नजिक भएको रेल दुर्घटनामा आइआएसइको योजना रहेको दाबी गरेको छ ।
उर्जामा यूएईले १६३ अर्ब डलर लगानी गर्दै
अबुधावी । खाडी मुलुक संयुक्त अरब इमिरेट्सले नवीकरणीय ऊर्जामा १ खर्ब ६३ अर्ब डलर लगानी गर्ने जनाएको छ । देशका आवश्यकताको आधा ऊर्जा सिर्जना गर्नका लागि यो परिमाणको लगानी गरिन लागिएको हो ।
भारतविरुद्ध राष्ट्रसंघमा उजुरी
पाकिस्तानले भारतले आफ्नो स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघमा उजुरी हालेको छ । पाकिस्तानले आफ्नो देशमा गरेको हस्तक्षेपसँग जोडिएका सबुतसहितको एक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेजलाई बुझाएको हो ।
१३ जना नोबेल पुरस्कार विजेताद्धारा राष्ट्रसंघलाई चिठ्ठी
बर्मामा मुस्लिममाथि बर्बर दमन भएको भन्दै १३ जना नोबेल पुरस्कार विजेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । १३ जना नोबेल पुरस्कार विजेताले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदलाई चिठ्ठी लेखेर बर्मामा मुस्लिममाथि दमन गरिएको दावी गरेका हुन् ।
पीडित महिलाबाट अबैध बच्चा जन्माएर बेचिन्छ
इजेरियामा एउटा यस्तो स्थान छ जहाँ कुखुराको पोल्ट्री फार्मजस्तै कलिलो उमेरकी किशोरीबाट गर्भधारणबाट बच्चा जन्माएर बेच्‍ने गरिन्छ।
जेलका कैदीबन्दी र प्रहरीबीच झडप
ब्राजिलको एक जेलमा कैदीबन्दी र प्रहरीबीच भएको झडपमा ५६ जनाको मृत्यु भएको छ । क्षमता भन्दा बढी कैदी रहेको जेलमा भएको झडप भएपछि केही कैदी भाग्न समेत सफल भएका छन् ।
भ्रष्ट कर्मचारीलाई उडिरहेको हेलिकोप्टरबाट फ्याक्ने फिलिपिन्सका राष्ट्रपतिको चेतावनी
पुष १४, काठमाडौं । फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टेले भ्रष्ट कर्मचारीलाई उडिरहेको हेलिकोप्टरबाट फ्याँक्ने चेतावनी दिएका छन् । साथै यसअघि पनि आफूले यस्तो गरेको उनले स्वीकार गरेका छन् । ‘जसले भ्रष्टाचारका लागि यो (सार्वजनिक कोष) प्रयोग गर्छ, म उसलाई हेलिकोप्टरमा मनिला लिएर जान्छु र आकासमा उडिरहेको बेला बाहिर फलिदिन्छु,’ उनले भनेका छन् ।
रुसी सैन्य बिमान बेपत्ता, खोजी कार्य जारी
पुष १०, काठमाडौं । रुसी सैन्य विमान वेपत्ता भएको छ । रुसी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार विमानमा ९१ जना सवार थिए । सोचीबाट उडेको टीयू १५४ विमान काला सागरमाथि पुगेलगत्तै राडरबाट सम्पर्क विच्छेद भएको छ । विमान उडेको २० मिनेटमा नै वेपत्ता भएको हो ।
ट्रम्पलाई हृवाइट हाउस प्रवेशमा रोक्ने प्रयास असफल
पुस ५, काठमाडौं । राष्ट्रपति चुनाव जितेका डोनाल्ड ट्रम्पलाई हृवाइट हाउस प्रवेश गर्न नदिने प्रयास असफल भएको छ । अमेरिकी इलेक्टोरल कलेजले उनलाई राष्ट्रपति निर्वाचित गरेको छ । चुनाव जितेको ६ सातापछि ट्रम्पले २७० इलेक्टोरल भोट पाएका छन, जसले औपचारिक राष्ट्रपति चुनिएका छन् । ट्रम्पले देशलाई एकतावद्ध बनाएर कडा परीश्रम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ट्रम्पलाई मत नदिन भन्दै इलेक्टोरलहरुलाई हजारौं इमेल र फोन आएको थियो । उसो त सबै राज्यका इलेक्टोरलहरुले जनमत भन्दा फरक भोट दिन सक्दैनन् । तर, केहीमा भने यो छुट थियो ।
ईन्डोनेसियामा सेनाको विमान दुर्घटना, १३ जनाको मृत्यु
पुस ३, काठमाण्डौ । इन्डोनेसियामा आइतबार सेनाको विमान दुर्घटना हुँदा कम्तीमा १३ जनाको मृत्यु भएको छ । टीमीका सहरबाट उडेको हरकुलस सी १३० विमान निर्धारित तालिकानुसार अवतरण हुन नसकी पूर्वी क्षेत्रमा आपतकालीन अवतरण हुने क्रममा दुर्घटना भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । स्थानीय समयअनुसार विहान करिब ६ बजेदेखि विमान सम्पर्कबिहीन भएको प्राविधिकहरुले बताएका छन । विमानमा एकजना यात्रुसहित १२ जना रहेका थिए । तीमध्ये तीनजना विमान चालक, आठजना प्राविधिक, एकजना नाविक (विमानको पथप्रदर्शक) र सुरक्षा अधिकृत रहेका थिए । विमान दुर्घटना भएको क्षेत्र मौसमको बारेमा भविष्यवाणी गर्न नसकिने क्षेत्रको रुपमा चिनिन्छ । दुर्घटना हुनुअगाडि विमान बादलमा छिरेको बताईएको छ ।
भारतपछि भेनेजुएलामा ठुला नोट माथि प्रतिबन्ध
मंसिर २७, काठमाडौं । भेनेजुएलाको सरकारले ७२ घण्टा भित्र देशको सबैभन्दा ठूलो मूल्यको बैंक नोटलाई सिक्कामा बदल्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको यस फैसलाले तस्करी तथा खाद्य समस्याबाट छुटकारा पाउने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रपति निकोलस मादुरोले नोट प्रतिवन्धले तस्कर गिरोहलाई पैसा ठेगान लगाउन समय नमिल्ने बताए । भेनेजुएलामा १०० बोलिवरको बैंक नोटको मूल्यमा पछिल्लो समय गिरावट आएको छ । र, यसको मूल्य दुई अमेरिकी सेन्ट बराबर भएको छ ।
एक चिन नितीको औचित्य नभएको नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइ
मंसिर २७, काठमाडौं । नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफु ‘एक चीन नीति’ मा बाँधिएर नबस्ने बताएका छन् । फक्स न्यूजसँगको कुराकानीमा ट्रम्पले यस्तो बताएका हुन् । जसको चीनले आलोचना गर्नसक्ने जनाइएको छ । ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि ताइवानकी राष्ट्रपतिसँग फोनमा वार्ता गरेका थिए । जसको चिनले आलोचना गरेको थियो । ट्रम्पले आफ्नो पहल चीनसँग नीति व्यापार जस्ता विषयमा केन्द्रीत हुने बताए ।
इराकको व्यस्त बजारमा हवाई हमलामा परी ६३ जनाको मृत्यु
मंसिर २३, काठमाडौं । इराकमा इस्लामिक स्टेटको कब्जामा रहेको अल कैम क्षेत्रमा हवाई हमलामा ६३ भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा धेरै बालबालिका र महिला रहेको बीबीसीले जनाएको छ । अमेरिकी नेतृत्ववाला गठबन्धन तथा इराकी एयर फोर्स दवै लगातार यस क्षेत्रमा बम खसालिरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म यो हमला कसले गरेको भन्नेबारे पुष्टि हुन सकेको छैन ।
ह्दयघातपछि तमिल नाडुका मुख्यमन्त्री जयललिताको अवस्था गम्भीर
मंसिर २०, काठमाण्डौ । तमिल नाडुका मुख्यमन्त्री जयललितालाई ह्दयघात भएपछि अवस्था ज्यादै गम्भीर भएको बताइएको छ । टाइम्स अफ इण्डियाको अनलाइन संस्करणले उनलाई इसीएमओ र लाइफ सपोर्ट सिस्टममा राखिएको जनाएको छ । ’मुख्य मन्त्रीलाई बिशेषज्ञहरुको एक समुहले उपचार गराईरहेका छन, अपोलो हस्पिटलका चिफ अप्रेटिङ अफिसर सुविह विश्वनाथनले बिज्ञप्तिमा भनेका छन् । यसअघि पनि ६८ बर्षिया जयललितालाई अपोलो हस्पिटलमा सेप्टेम्बर २२ मा ज्वरो र डिहाइड्रेसनका कारण भर्ना गरिएको बताइएको छ ।
फिडेल कास्ट्रोको निधन
मंसिर ११ । क्युवाको राजनीतिका बहुप्रतिष्ठित व्यक्तित्व तथा पूर्व राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रोको शुक्रबार राति निधन भएको छ । उनी ९० बर्षका थिए ।
सन् २०१६ सर्वाधिक तातो वर्ष हुने
मंसिर १ । विश्व मौसम संगठन (डब्लुइएमओ)ले सन् २०१६ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च तापक्रम भएको वर्ष हुने संकेत देखिएको घोषणा गरेको छ ।
भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको मृगौलामा समस्या
मंसिर १, नयाँ दिल्ली । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको मृगौलामा समस्या भएको छ ।
रुसी अर्थमन्त्री उल्याकायेब २० लाख डलर घुससहित रंगेहात पक्राउ
कात्तिक ३०, काठमाडौं । घुस लिएको आरोपमा रुसका अर्थमन्त्री एलेक्सी उल्याकायेब पक्राउ परेका छन् । रुसको भ्रष्टाचार विरोधी संस्था इन्भेष्टिगेटिभ कमिटीका अनुसार मन्त्री एलेक्सीले एक तेल कम्पनिबाट २० लाख डलर घुस लिएका छन् । रोजेनफण्टले अर्को तेल कम्पनी बासेनफण्टको ५० प्रतिशत स्वामित्वका लागि स्वीकृति दिँदा अर्थमन्त्री एलेक्सीले धम्की दिएर घुस लिएको कमिटीकी प्रवक्ता स्वतलाना पेट्रोनेकोवलाई उद्धृत गर्दै रुसी समाचार एजेन्सीले जनाएको
३० लाख आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने ट्रम्पको भनाई
कात्तिक २९, वासिंङ्टन । नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले करिव ३० लाख गैरकानुनी आप्रवासीलाई उनीहरुकै देश फर्काइदिने बताएका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पहिलोपटक सीबीएस टेलिभिजनलाई अन्तरवार्ता दिँदै ट्रम्पले अपराधिक गतिबिधिमा संलग्न त्यस्ता गैरकानुनी आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने बताएका हुन् । पहिलो चरणमा अपराधिक रेर्कड भएका आप्रवासीहरु र लागुऔसध कारोबारमा संलग्नहरुलाई कारबाही गरिने बताउँदै ट्रम्पले त्यस्तो सं
पुटिन अमेरिकाको राष्ट्रपति ट्रम्पसँग सम्बन्ध सुधारी काम गर्ने
कार्तिक २५, मस्को । रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बुधबार रिपब्लिकन पार्टीका नेता डोनाल्ड ट्रम्पलाई नयाँ राष्ट्रपतिमा अमेरिकी जनताले निर्वाचित गरेपछि
जनवरी २० बाट ट्रम्पले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्ने
कार्तिक २४, वासिङ्टन डिसी । अमेरिकाको ४५ औं राष्ट्रपतिको रुपमा रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार उद्योगपति डोनाल्ड ट्रम्प बिजयी भएका छन् । आफ्नो चुनावी अभियानको केन्द्रमा उपस्थित समर्थकलाई उनले सम्बोधन गर्दै धन्यबाद दिइसकेका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचन जितेपनि हृवाइट हाउस प्रवेशका लागि उनले अझै दुई महिनाभन्दा बढी समय पर्खनु पर्ने हुन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव जितेका
कात्तिक २४, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा रिपब्लिकन पार्टीका डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भएका छन् । यससँगै ट्रम्पका समर्थकहरुले खुसी मनाउन थालेका छन् भने अहिले ट्रम्पले सम्बोधन गरिरहेका छन् । डेमाक्रेटिक उम्मेदवार हिलरी क्लिन्टनलाई पराजित गर्दै ट्रम्प अमेरिकाको ४५ औं राष्ट्रपति बनेका हुन् । अन्तिम चरणमा पुगेको मत गणनामा ट्रम्पले २७४ इलेक्टोरल मत पाएको समाचार एजेन्सी एपीले जनाएको छ । ५३८ इलेक्ट्रोरल कलेजमा
सबै भोट गणनापछि मात्र हिलारी क्लिन्टन बोल्ने
कात्तिक २४, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डेमोक्रिटिक पार्टीका उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनले अन्तिम मत परिणाम नआउँदासम्म हार स्वीकार नगर्ने भएकी छन् । क्लिन्टनको चुनावी अभियान प्रमुख जोन पोडोस्टाले समर्थकहरुलाई सम्बोधन गर्दै क्लिन्टनले तत्काल नबोल्ने बताएका छन् । अझै मत गणना जारी रहेको र हरेक भोटको गणना हुने भन्दै उनले आज क्लिन्टनले केही नबोल्ने जानकारी दिएका छन् । क्लिन्टनले भोलि मात्र बोल्ने भ
डोनाल्ड ट्रम्पलाई जितका लागी ४ मत आवश्यक
कात्तिक २४, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा रिपब्लिकन उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्प जित नजिक पुगेका छन् । मत परिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । र, ट्रम्पले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी डेमोक्रेटिक हिलरी क्लिन्टनलाई निकै पछि पारेका छन् । साथै मत गणना भइरहेको निर्णायक मानिएका प्रमुख राज्यहरुमा ट्रम्पले नै अग्रता लिइरहेका छन् । ५० राज्यमध्ये ४२ को मत परिणाम आएको छ । र, ट्रम्पले २६६ इलेक्टोरल भोट जितेका छन् भने हिलरीले २१८ भोट जितेकी छन्
अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा ट्रम्प जितनजिक
कार्तिक २४,वासिंङटन । अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनको मतगणनामा रिपब्लिकन पार्टीका उमेद्वार डोनाल्ड ट्रम्पले अग्रता लिएका छन । हाल सम्म ट्रम्पले ४८.५ प्रतिशत भोट प्राप्त गर्दा उनका प्रतिद्वन्द्वी डेमोक्रयाटिक पार्टीकी उमेद्वार हिलारी क्लिन्टनले ४७ प्रतिशत भोट प्राप्त गरेकी छन् । हाल सम्म ट्रम्पले २ सय ४४ इलेक्ट्रोल भोट जित्दा क्लिन्टनले २ सय ९ इलेक्ट्रोल भोट जितेकी छन्। अमेरिकाका सबै राज्यहरुमा ८ नोभेम्बरको बिहानैदेखि शुरु भएको मतदानपश्चात् उम्मेदबारद्वय हिलारी क्लिन्टन र डोनाल्ड जोन ट्रम्पमध्ये को को कहाँ कहाँ विजयी भएकोबारे बिभिन्न राज्यबाट धमाधम मतगणनाको प्रारम्भिक नतिजा
संभावित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कस्ता व्यक्ति हुन्
कार्तिक २४, काठमाडौं । सत्तरी वर्षका डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट अमेरिकी राष्ट्रपतिको प्रतिष्पर्धी हुन्। उनी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनकी श्रीमती र
भारु नोटवारे राष्ट्र वैंकको यस्तो निर्णय
कार्तिक २४, काठमाडौं । आकस्मिक रुपमा भारतीय सरकारले ५०० र १००० का नोट प्रतिवन्ध लगायो । निश्चित समय तोकेर सटही गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
अमेरिकामा राष्ट्रपतीय निर्वाचन आज
२३ कार्तिक । अमेरिकाको संघीय अनुसन्धान ब्युरोले निर्वाचनको ११ दिनअघि पुनः छानबिन थालेको इमेल दुरुपयोग काण्डमा
दिल्लीमा बर्षकै प्रदुषण उच्च, विद्यालय बन्द, प्रदुषणले लियो कुहिरोको रुप
कात्तिक २१, नयाँदिल्ली । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा प्रदुषणको मात्रा लगातार बढेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । दिपावलीमा पड्काइएका पटाकाहरुको कारण प्रदुषणको मात्रा बढेर मिटरले समेत नाप्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ र राज्य सरकारले विद्यालयहरु बन्द गराएको छ । प्रदुषण बढेर खतरनाक स्थितिमा पुगेपछि दिल्ली सरकारले मन्त्रिपरिषदको आपतकालीन बैठक बोलाएको छ । वातावरणविदहरुले घर बाहिर ननिस्किन स्थानीयबासीलाई सु
आइएसका प्रमुख बग्दादी रहेको सहर नै इराकी सेनाले पूर्ण आफ्नो नियन्त्रणमा लिने प्रयास
बग्दाद चरमपन्थी विद्रोही समूह इस्लामिक स्टेट (आइएस) का प्रमुख अबु बकर अल बग्दादीले आफ्ना कार्यकर्तालाई इराकी सेना विरुद्धको लडाइमा पछाडि नहटी साटो आत्मसम्मानका साथ आफ्नो भूमिमा लड्न आग्रह गरेका छन्।
अदालतको फैसलाअनुसार साउदी राजकुमारलाई कोर्राको सजाय
साउदी अरबका एक राजकुमारलाई कोर्रा हानी सजाय दिइएको छ। साउदी अरेबियाको सत्तासीन अल साउद परिवारका एक राजकुमारलाई जेलभित्रै कोर्रा दिइएको हो।
भारत–पाकिस्तान तानब तिब्र बन्दै, २ भारतीय सैनिकको मृत्यु
कार्तिक ११ काठमाडौं । भारत–पाकिस्तान सीमामा विहिवार साँझदेखि तनाव बढेको छ । दुवै तर्फबाट एक अर्कालाई दोषी देखाउँदै फायरिङ भएको छ । भारतीय मिडियाले पाकिस्तानी रेन्जरको तुलनामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले १० गुणा ज्यादा फायरिङ गरेको दावी गरेका छन् । भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले सीमा सुरक्षा बललाई जोडदार जवाफ दिन निर्देशन दिएका छन् ।
इरानले बनायो आत्मघाती विमान
कार्तिक ११ । तेहरान–इरानको विशिष्ट रिभोलुसनरी गार्डले बुधबार आपूmले ‘आत्मघाती चालक बिहीन विमान’ को निर्माण गरेको बताएको छ ।
नोबेल शान्ति पुरस्कार कोलम्बियाका राष्ट्रपति सान्तोसलाई दिने घोषणा
असोज २१, काठमाडौं । यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार कोलम्बियाका राष्ट्रपति जुआन मानुअल सान्टोसलाई प्रदान गरिने भएको छ । ५२ वर्ष लामो गृहयुद्ध
हाइटीमा म्याथ्यू आँधीले विनाश, २८३ को मृत्यु
असोज २१, काठमाडौं । म्याथू नामक आँधीका कारण हाइटीमा मृत्यु हुनेको संख्या २ सय ८३ पुगेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । हाइटी र क्यूबापछि आँधी अमेरिकाको फ्लोरिडातर्फ अघि बढेको छ । विनाशकारी आँधीका कारण हाइटीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण शहर जेरेमी पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएको छ । त्यहाँ ८० प्रतिशत घर ढलेको छ । दक्षिणी शहर सूदमा ३० हजार घर तहसनहस भएको छ । आँधीले विनाश मच्चाएपछि हाइटीमा राष्ट्रति चुनाव स्थगित भएको छ ।
पोर्चुगलका पूर्वप्रधानमन्त्री गुटरेस राष्ट्रसंघका नयाँ महासचिव बन्ने
असोज २०, काठमाडौं । पोर्चुगलका पूर्वप्रधानमन्त्री एन्टेनियो गुटेरेश संयुक्त राष्ट्रसंघका नयाँ महासचिव बन्ने भएका छन् । बुधबार संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि रुसका राजदूत चुरकिन वितालीले ६६ बर्षिय एन्टोनि गुटेरेशलाई लोकप्रिय व्यक्ति घोषणा गरेका थिए ।
भारतीय रक्षा विशेषज्ञ नै भन्छन– सर्जिकल स्ट्राईक भएकै छैन
असोज २०, काठमाडौं । केहि दिनअघि भारतीय मिडियाले ठूलो प्राथमिकताका साथ भारतले पाकिस्तानी भूमिमा छिरेर गरेको सर्जिकल स्ट्राइकको दावी पाकिस्तानले त्यतिबेलै खण्डन गरेको थियो । तर भारतकै एक रक्षा बिशेषज्ञले, दावी गरिएअनुसारसर्जिकल स्ट्राइक नभएको बताएपछि भारतीय मिडियाको प्रोपोगाण्डा छताछुल्ल भएको छ । भारतीय रक्षा बिशेषज्ञ अफसर करिमले भनेका छन् कि ‘त्यसलाई सर्जिकल स्ट्राइक भन्नु गलत हुनेछ । किनकी सर्जिकल स्ट्राइक परमा
कार्तिक १७ गते भारतीय राष्ट्रपति नेपाल आउने
आश्विन १७, काठमाण्डौ । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले अगामी कार्तिकमा नेपाल भ्रमण गर्ने भएका छन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा मुखर्जीले कार्तिक १७ देखि १९ सम्म नेपालको तिनदिने भ्रमण गर्ने तय भएको हो । लामो समयदेखि थाँती रहेको मुखर्जीको भ्रमणको मिति तय भएलगातै दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र काठमाडौंमा परराष्ट्र मन्त्राय तयारीमा जुटेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसअघि नेपालकी राष्ट्रपति भण्डारीले भारत भ्रमण गर्ने र त्य
भारतद्वारा पाकिस्तानलाई आतंककारीको संज्ञा
न्युयोर्क । भारतले पाकिस्तानलाई आतंककारीको राष्ट्रको संज्ञा दिएको छ। न्युयोर्कमा जारी राष्ट्रसंघको ७१ औं महासभालाई सम्वोधन गर्दै भारतीय प्रतिनिधि मण्डलकी प्रमुख इनाम गाम्भिरले पाकिस्तानले आतंकवादलाई प्रश्रय दिइरहेको र उसले आतंकबाद विस्तारका लागि लाखौं डलर खर्चने गरेको आरोप लगाइन्।
उत्तर कोरियाद्वारा अर्को रकेट मेसिनको परीक्षण
असोज ५, सोल । उत्तर कोरियाले ठुलो शक्तिको रकेट मेसिन सफलतापूर्वक परीक्षण गरेको जनाएको छ । संयुक्तराज्य अमेरिकाको पूर्वीसमुद्रतर्फ लक्षित गरेर परीक्षण गरेको उत्तर कोरियाको आधिकारीक सञ्चार माध्यमले जनाएको छ ।
१७ भारतीय सैनिकको मृत्यु
असोज २, नयाँदिल्ली । भारत प्रशासित कश्मिरको सैन्य इलाकामा आइतबार बिहान भएको हमलामा १७ भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको छ। समाचार संस्था पिटिआईका अनुसार सेनासँग भएको मुठभेडमा ४ विद्रोहीको पनि मृत्यु भएको छ।
न्युयोर्क सिटीमा बिस्फोट
अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीमा बिस्फोट भएको छ । बिस्फोटनमा परि कम्तिमा २५ जना घाइते भएको अमेरिकाको अग्नी विभागलाई उद्धृत गर्दै सिएनएनले जनाएको छ ।
विश्वमा भारत असमान देशेको दोश्रो सुचीमा
भदौं २०, काठमाडौं । संसारका सबैभन्दा बढी असमानता भएका देशको सुचिमा भारत दोश्रो नम्बरमा परेको छ । जोहानसबर्ग स्थित सम्पति अनुसन्धान गर्ने संस्था ‘न्यु वर्ल्ड वेल्थ’को रिपोर्ट अनुसार रसियापछि संसारको सबैभन्दा असमान देश भारत हो ।
विद्रोहीलाई समाप्त गर्न गोर्खा सैनिक लैजाने फिलिपिन्सका राष्ट्रपति डुर्टेतेको योजना
भदौ २०, काठमाडौं । फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुर्टेतेले विद्रोही समुह अबु सयाफलाई समाप्त पार्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन । यसका लागि गोर्खा सैनिकको सहयोग लिन पनि तयार रहेको बताएका छन् । देशको इतिहासमा सबैभन्दा पाको राष्ट्रपति (७१ बर्ष) बनेका उनलाई अहिले ‘द पनिसर’ अर्थात ‘सजाय दिने व्यक्ति’ भनेर समेत चिनिन्छ । उनले लागूऔषध तस्करमाथि कडा रबैया अपनाएका छन । राष्ट्रपति भएलगतै उनले लागूऔषध
सिरियाको एलेप्पो शहर पुनः सरकारी नियन्त्रणमा
भाद्र २०, सिरिया । सिरियाको एलेप्पो शहर पुनः सरकारी सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ । सेनाको नियन्त्रणबाट पछिल्लो महिना सो शहर बिद्रोहीले आफ्नो कब्जामा लिएका थिए । एलेप्पोका सबै क्षेत्रमा सेनाले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको स्थानीय अधिकारीलाई उदृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ । यद्यपी दक्षिणी क्षेत्रमा भने बिद्रोहीले
यसकारण असन्तुष्ट भए ओबामा चीनसँग
जी–ट्वान्टी सम्मे लनका क्रममा चीनको हाङझाउ पुगेका बेला आफूप्रति कूटनीतिक अभद्रता’ प्रदर्शन गरिएको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्
अफगान बलको कारबाहीमा २० आतङ्ककारी मारिए
कुन्दुज (अफगानिस्तान), भदौ ४। अफगानिस्तानमो कुन्दुज प्रान्तको खान अबाद जिल्लामा अफगान सुरक्षाबलले जारी राखेको कारबाहीमा २० तालिवान आतङ्ककारी मारिएका छन् ।
संसारकै ठूलो विमानले पहिलो उडान भर्‍यो
एजेन्सी, भदौ २। संसारकै ठूलो जहाज एयरल्यान्डर १० ले आफ्नो पहिलो उडान भरेको छ। चारदिन अघि प्राविधिक समस्या आएपछि एयरल्यान्डर १० को उडान रद्द गरिएको थियो।
सिरिया युद्धको एक भावनात्मक तस्वीर, जसले गिज्याईरहेको छ विश्वलाई
भदौ २, काठमाडौं । लामो समयदेखी सिरियामा चलिरहेको गृहयुद्धका कारण लाखौ व्यक्ति मारिईसकेका छन । राष्ट्रपति बसर अल असदको राजिनामाको माग गर्दै विगत ६ बर्षदेखी सिरियामा सरकार र विपक्षीविच युद्ध जारी छ । युद्ध आफैंमा अप्रिय शब्द हो । युद्धको संकट झेल्न नसकी भुमध्यसागरमा शरणार्थीका रुपमा युरोप प्रवेश गर्न खोज्ने हजारौ मानिसले यो विचमा समुन्द्रमा डुंगा दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाईसकेका छन । सिरियामा चलिरहेको गृहयुद्धले मानि
संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा कङ्गोमाथि कडा निन्दा
संयुक्त राष्ट्रसंघ, १ भदौ । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदले डेमोक्र्याटिक रिपब्लिक अफ कङ्गो (डिआरसी)मा भएको सामूहिक हत्याको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ । कम्तीमा ५० जना सर्वसाधारण ज्यान जाने गरी गरिएको यस आमहत्याको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषदले कडा शब्दमा निन्दा गरेको हो ।
इन्धन बोकेको मलेसियन जहाज अपहरण
काठमाडौं, भदौ १। इन्धनको बोकेको मलेसियन समुद्री जहाज अपहरणमा परेको छ । मलेसियाको तान्जुङ पल्पासबाट नौ लाख लिटर डिजेल भरेर आउँदै गरेको ट्याङ्कर सहितको जहाज इन्डोनेसियाको समुद्री क्षेत्रतर्फ लगिएको समुन्द्री सुराक्षार्थ खटिएका मलेसियन अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ ।
भारतले ७० औं स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै, विश्व नेतृत्वको लागि तयार हुन मोदीको आग्रह
साउन ३१, नयाँदिल्ली । भारतले आज आफ्नो ७०औं स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदैछ । सन् १९४७ अगष्ट १५ मा बेलायती उपनिवेसबाट मुक्त भएको दिनको सम्झनामा हरेक बर्ष उसले स्वतन्त्रता दिवस मनाउदै आएको छ । भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले ७० बर्ष अघि राजधानी दिल्लीस्थित लालकिल्लामा राष्ट्रिय झण्डा फहराएर अगष्ट १५ का दिन स्वतन्त्रता दिवस मनाउने घोषणा गरेका थिए । लालकिल्लामा आज आयोजित विशेष साँस्कृतिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्बोधन गर्दै सामाजिक न्यायबाट नै देश समुन्नत हुने बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वको दशौँ
अमेरिकी राष्ट्रपति ओवामा आईएसको नाईके भएको रिपब्लीकन उमेद्धवार ट्रम्पको आरोप
श्रावण २७, वासिङटन । अमेरिकी राष्ट्रपति पदका रिपब्लीकन उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति बारक ओबामा मुस्लिम अतिवादी समुह आईएससँग सम्बद्ध रहेको आरोप लगाएका छन । मध्यपूर्वदेखि यूरोपसम्म आतंक मच्चाइरहेको इस्लामिक स्टेट समूहको गठन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले गरेको उनले आरोप लगाएका हुन । फ्लोरिडा राज्यको फोर्ट लाउडरडेलमा भएको एक र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले ओबामालाई आतंकबादसँग जोड्दै बाराक हुसैन ओबामा भनि सम्बोधन समेत गरे । रिपब्लिकनका तर्फबाट राष्ट्रपति
चर्चित भारतिय मानवअधिकारबादी महिला इरोम शर्मिलाले १६ बर्षदेखि जारी अनशन तोड्दै
श्रावण २५, मणिपुर । चर्चित मानवअधिकारवादी महिला इरोम चानु शर्मिलाले आज १६ वर्ष पछि अनशन तोड्दै छिन् । विश्वमै सवैभन्दा लामो समयसम्म अनशनमा बसेकी भारतको उत्तरपुर्वी राज्य मणिपुर निवासी ४४ बर्षिया शर्मिलाले आज स्थानिय अदालतमा पेश भएर अनशन तोड्ने बताएकी हुन । अदालतमा १० हजार धरौटी बुझाएसँगै १६ बर्षदेखीको प्रहरी हिरासतबाट समेत उनी मुक्त भएकी छन । शर्मिलाको अनशन किन ? राज्यले गरेको दमन विरोधी
पाकिस्तानको सरकारी अस्पतालमा विष्फोट, ३० को मृत्यु, दर्जनौ घाइते
साउन २४, पाकिस्तान । पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तको राजधानी क्वेटास्थित एक सरकारी अस्पतालमा बम विष्फोट हुँदा ३० जनाको मृत्यु भएको छ । अन्य दर्जनौं व्यक्तिहरु घाइते भएका छन् । सोमबार बिहान विष्फोट हुनु अघि आक्रमणकारीले गोली चलाएका थिए । क्वेटा सहरमा एक वरिष्ठ वकीलको हत्यापछि भएको यो विष्फोटमा पनि धेरैजसो वकीलहरु नै घाइते भएको बताइएको छ । हत्या भएका वकिलको शव अस्पताल ल्याइएका बेला
थाईल्याण्डमा संविधान लागु गर्ने की नगर्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह हुँदै
श्रावण २३, थाईल्याण्ड । थाइल्यान्डमा आज जनमत संग्रह भईरहेको छ । सेनाले गठन गरेको समितिले बनाएको संविधानलाई लागु गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा जनमत संग्रह भइरहेको हो । थाई सेनाले सन् २०१४ मा थाइल्यान्डको सत्ता आफ्नो कब्जामा लिएसँगै नयाँ संविधान बनाउनका लागि समिति बनाएको थियो । सत्ता पक्षले यो संविधान लागु भए देशमा प्रजातन्त्रको बहाली हुने दाबी गरे पनि विपक्षीहरुले निरंकुश संविधान लाद्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् । विपक्षीले जनमत संग्रहका लागि खुलेर प्रचारप्रसार ग
पुल भत्किदा चार वटा गाडी नदीमा बगे
भारतको मुम्बई–गोवा राजमार्गमा रहेको एउटा पुल भत्किएको छ । रायगढ जिल्लामा रहेको सावित्री नदीमा बनाइएको पुल भत्किएको हो ।
महिलाले स्कूटर चलाउन नपाउने
आतंककारी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीनका कमान्डर बुरहान बानीको इन्काउन्टरपछि भारतको महाराष्ट्र इलाकाको घाटीको हालत दिनानुदिन बिग्रदो अवस्थामा छ । आइतबार श्रीनगरको सिटी सेन्टरमा लगाइएको पोष्टरले त्यहाँका जनतालाई तनाव थप्ने काम गरेको छ । पोष्टरमा महिलालाई धम्कीपूर्ण सन्देश दिइएको छ ।
प्यारासुट बिना २५ हजार फिटबाट जम्प गरेर किर्तिमान
श्रावण १६,काठमाडौं । अमेरिकी नागरिक ल्युक आइकिन्सले २५ हजार फिटको उचाइबाट बिना प्यारासुट जम्प गर्दै जालीमा सुरक्षित ल्यान्ड गर्ने किर्तिमान कायम गरेका छन् ।
आशाहरुलाई सधैं जीवन्त राख्न जरुरी छ । न डेमोक्रेट, न रिपब्लिकन, न लेफ्ट, न राइट
साउन १२, न्युयोर्क । अमेरिकी प्रथम महिला मिसेल ओबामाले डेमोक्य«ाटिक पार्टीको एक कार्यक्रममा हिलारीलाई समर्थन गर्न भन्दै गरेको भाषण अहिले संसारभर चर्चित बनेको छ । त्यसै भाषणको सम्पादित भावनुवाद । “अहो, मेरो श्रीमान राष्ट्रपति किन बन्नुपर्छ भनेर तपाइँहरुसँग कुरा गर्न यस्तै भेलामा आएको पनि आठ वर्ष वितिसकेछ । मैले त्यतिबेला ओबामाको चरित्र र विश्वासबारे बोलेका कुराहरु सम्झिनुहुन्छ? उनको शालिनता र अनुग्रहको कुरा पनि । ह्वाइट हाउसबाट उनले हाम्रो देशलाई सेवा गरेको हामीले प्रत्येक दिन देखिरहेका छौँ।
हिलारी औपचारीक रुपमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार घोषणा
साउन १२, न्युर्योक । अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि डेमोक्रेटिक पार्टीबाट हिलारी क्लिन्टन मंगलवार उमेदवार घोषित भएकी छिन् । उनको रिपब्लिकन उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्पसँग कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ ।
जर्मनीको शपिगं सेन्टरमा गोली चल्दा ९ जनाको मृत्यु
साउन ८, म्युनिख । जर्मनीको म्युनिख स्थित ओलम्पिया शपिंग सेन्टरमा गोली चल्दा ९ जनाको मृत्यु भएको छ । विविसीका अनुसार गोली चलाउने युवक १८ बर्षिय म्युनिखमा बस्ने इरानियन भएको बताएको छ । शपिंग सेन्टर भित्र गोली चलाएको केहि घण्टा पछि ती युवकले आफुलाई
पाकिस्तानी पुर्वराष्ट्रपति परवेज मुशर्रफको सम्पति जफत गर्न अदालतको आदेश
साउन ५ । पाकिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति परवेज मुशर्रफको सबै सम्पत्ति जफत गर्न त्यहाँको एक अदालतले आदेश दिएको छ । राजद्रोहको मुद्दामा अदालतमा उपस्थित नभएको भन्दै उनका सबै बैंक खाता र सम्पत्ति जफत गर्न अदालतले मंगलबार आदेश दिएको हो । मुशर्रफका वकील फैसल चौधरीले अदालतको यो आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जाने बताएका छन् । मुशर्रफ सन् २०१६ मार्चदेखि युएईमा छन् । स्वास्थ्य उपचारका लागि त्यहाँ गएका उनी अझै स्वदेश फर्किएका छैनन् । मुशर्रफ पाकिस्तानका पूर्व सैनिक शासक हुन् । उनले सन् २००८ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनी राष्ट्रपति हुँदा सन् २००७ मा देशमा सं
बेलायतसँग व्यापार सम्झौता गर्न इच्छुक रहेको अष्ट्रेलियाको भनाई
श्रावण २, २०७३ । अष्ट्रेलियाले ब्रिटेनसँग खुला व्यापार सम्झौताका लागी आफु तयार रहेको बताएको छ । बेलायतका प्रधानमन्त्री टेरिसा मेले अष्ट्रेलियाको कदम अत्यन्त उत्साहजनक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँले ब्रक्जिट बेलायतका लागी फाइदा पुर्ण रहेको पुष्टि भएको समेत उल्लेख गर्नुृभएको छ । अष्ट्रेलियन समकक्षी माल्कम टर्नबुल सँ
टर्कीमा सैन्य कू को इतिहास र सैन्य कू पछाडिका कारण
किन भयो त ‘कू’ को प्रयास ? साउन २, काठमाडौं । टर्कीमा सेनाको एक समुहले सैन्य ‘कू’को असफल प्रयास गरेपछि यतिबेला विश्वभर यसैको चर्चा छ । राजनीतिक विश्लेषकहरुले सेनाको अधिकार कटौती भएको र आन्तरिक अन्तरविरोधलाई कूको कारण मानिरहेका छन् । राष्ट्रपति एर्डोगान मार्मा्रिसमा विदा मनाइरहेका थिए, त्यसैबेला टर्किश आम्र्ड फोर्स, जसमा सैनिक, नौ सैनिक र वायु सेना समेत पर्दछ, ले देशमा कानुनी राज, स्वतन्त्रता, संवैधानिक अधिकार र सामान्य सुरक्षाको अवस्था बिग्रिएकोले सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको दाबी ग¥यो । तर अंकारा आइपुगेका राष्ट्रपति एर्डोगानले हजारौँ जनतामाझ सडकमा ओर्लिएर अधिकार रक्षार्थ आफूलाई सघाउन सहयोग गर्न अपिल गरे । ‘कू’ को प्रयासलाई उनले राजद्रोह भन्दै निन्दा गरे । त्यसपछि दशौँ हजार मानिस सडकमा ओर्लिए । धेरैको हातमा टर्कीको झण्डा फर्फराइरहेको थियो । केही मान्छे ट्यांकमाथि चढेका तथा बाटोमा उभिएर सैनिक वाहनहरुको आवतजावतमा व्यवधान खडा गरिरहेको दृश्य पनि टेलिभिजनमा प्रसारण गरिएको थियो ।
कश्मिरमा जारी आन्दोलन हिंस्रक बन्दै ,मिडियामा सेन्सरसिप
साउन २, मुम्बई । भारत नियन्त्रित कश्मिरमा जारी हिंसालाई नियन्त्रणमा लिनका लागि उक्त क्षेत्रका अखबारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । प्रशासनले स्थानीय पत्रिकाको अफिसमा छापामा मारेर पत्रिकाका प्रतिहरु जफत गरेको छ । जारी हिंसामा कश्मिरमा मारिनेको संख्या ४३ पुगिसकेको छ । त्यस्तै १५ सय सुरक्षाकर्मी र ३१४० सर्वसाधारण घाइते भएको बताइएको छ । सन् १९९० पछि उक्त क्षेत्रमा पहिलो पटक
अपडेट-टर्कीमा सेनाको कू प्रयास असफल,२०० भन्दा धेरैको मृत्यु
साउन १, स्तानबुल । टर्कीमा सेनाको एक समुहले सत्ता कब्जा गर्न खोजेको प्रयासलाई राष्ट्रपति एर्ड़ोगन समर्थित सेनाले असफल बनाइएको जनाएको छ । गए राति देखि सेनाको एक समुहले राष्ट्रिय टेलिभिजनमा सत्ता आफुले लिएको घोषणा गर्दै देश भरी कर्फ्यु र मार्शल नियम लागु भएको घोषणा गरेको थियो ।
टर्कीको कू प्रयासमा संलग्न रहेको आरोपमा ७५४जना सैनीक पक्राउ, ३० जना बर्खास्त
मृत्यु हुनेको संख्या ६० पुग्यो साउन १, स्तानबुल । टर्कीस सरकारले शुक्रबार राति भएको ‘कु’ प्रयासमा संलग्न रहेको आरोप मा ७५४ जना सैन्य अधिकारीहरुलाई पक्राउ गरेको छ भने ३० सैन्य अधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरिएको त्यहाँको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
टर्कीमा सैन्य कू ४२ जनाको मृत्यु
साउन १, इस्तानबुल । टर्कीमा सेनाको एक सुमहले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको दाबि गरेको छ । सेनाको समुहले चलाएको गोली लागेर ४२ जनाको मृत्यु भएको छ । टर्कीका राष्ट्रपति रेसिप तैयिप एर्दोगान आफ्ना समर्थकहरुका साथ इस्तानबुल विमानस्थलमा देखिएको स्थानिय मिडियाले जनाएका छन् ।
फ्रान्समा फेरि आतंकवादी आक्रमण
३१ असार । फ्रान्सको दक्षिणी सहर नाइसमा भएको आतंकवादी आक्रमणमा ७७ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। घटनामा ५० भन्दा बढीको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। फ्रान्सको नाइसका एउटा अनियन्त्रिक ट्रक भिडमा प्रवेश गरेको थियो । घटनामा १५० बढी घाइते भएका छन् ।
थेरेसा बेलायती प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का
असार २८,लन्डन । कन्जरभेटिभ पार्टीकी नेत्री थेरेसा मे बेलायतकी नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ । प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेकी कन्जरभेटिभ पार्टीकी अर्की नेत्री आन्द्रेई लिडसमले सोमबार आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि थेरेसा प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएको हो ।
भारतको विदेश नीतीको आलोचना
असार २७,काठमाडौं । नरेन्द्र मोदीले १३ जेठ ०७१ मा भारतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गर्दा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) आबद्ध मुलुकका राष्ट्र एवं सरकारप्रमुखहरूको आतिथ्यता गर्दै दिएको सन्देश थियो, विदेश नीतिको प्राथमिकता निकटस्थ छिमेकी मुलुकहरू हुने छन् । त्यसलाई पछि ‘नेबरहुड फस्ट’ (छिमेकी पहिलो प्राथमिकता)को उपमा दिइयो । त्यसलगत्तै भुटानबाट मोदीले छिमेकी मुलुकहरूको भ्रमण प्रारम्भ गरे ।
ट्राफिक जाममा फसेर १२जनाको मृत्यु
असार२५, काठमाडौं । इन्डोनेशियामा केहिदिन यता ट्राफिक जाममा फसेका १२ जनाको मृत्यु भएको छ । पानीको कमी तथा थकानका कारण उनीहरुको मृत्यु भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । जावा द्वीपमा रमजान महिनाको अन्त्यमा छुट्टी मनाउन निस्किएका मानिसहरु जाममा फसेका हुन् । इन्डोनेशिया ट्राफिक विभागका अधिकारीका अनुसार तीन दिनमा जाममा फसेका १२ जनाको मृत्यु भएको
क्लिन्टनलाई सहयोग गर्न बाराक ओबामाको आग्रह
असार२२, वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्नो समर्थन हिलारी क्लिन्टनलाई रहेको बताएका छन् । बुधबार हिलारी र डोनाल्ड ट्रम्पका बीचको चुनावी रस्साकसीको भविष्य र काल्पनिक अतितको बीचको कुनै एक विकल्पलाई चुन्ने अभ्यास भएको बताएका छन् ।
बंगलादेशमा बन्धक बनाइएकाहरुको मृत्यु भएको पुष्टि
असार १८, ढाका । बंगलादेशको राजधानी ढाकास्थित एक रेष्टुरेन्टमा आइएसले बन्धक बनाएका २० जनाको हत्या भएको बंगलादेश सरकारले जनाएको छ । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार, शुक्रबार साँझ ८ बजेर ४५ मिनेटमा कैयन् हतियारधारी मानिसहरु अल्लाह ओ अकबरको नारा लगाउँदै रेष्टुरेष्टमा पसेर भान्साका कर्मचारीदेखि सबैलाई बन्धक बनाएका थिए । उत्त घटनामा बन्धक बनाइएका २० र आतंककारी सहित २८ जना मारिएको सरकारले जनाएको छ । यो घटनाको जिम्मा अइएसले लिएको छ । आर्मी ब्रिगेडियर जेनेरल नाइम अ
असार १८,काठमाण्डौं । भारतीय राष्ट्रपति प्रवण मुखर्जी नेपाल आउने भएका छन् । तर मुखर्जीको भ्रमण मिति भने तय भइसकेको छैन् । नेपाल र भारतबीच उच्च राजनीतिक भ्रमण आदानप्रदानका लागि आफूहरू सधैं खुला रहेको भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाइ छ। विदेश मन्त्रालयमा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा राष्ट्रपति मुखर्जीको सम्भावित नेपाल भ्रमणका सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता विकास स्वरूपले भारत सधैं उच्च राजनीतिक भ्रमण आदानप्रदानका लागि खुला रहेको बताएकाछन् ।
काबुलमा बम आक्रमण ४० जनाको मृत्यु
असार १६,काबुल । अफगानिस्थानमा फेरी अर्को आत्मघाती बम विस्फोट भएको छ । प्रहरी प्रशिक्षार्थीहरुको गाडीमा गरिएको आत्मघाती आक्रमणमा परी ४० जनाको मृत्यु भएको छ । बीबीसीका अनुसार दुई वटा आत्मघाती बम ग्राजुएट्स कार्यक्रमबाट फर्कंदै गरेको प्रहरी प्रशिक्षार्थीलाई लक्षित गरेर काबुलको पश्चिमी बाहिरी क्षेत्रमा विष्फोट गराइएको थियो ।
इस्तानबुलमा आतंकवादी हमला ३६ को मृत्यु, सयौं घाइते
असार १५, काठामाडौं । टर्कीको इस्तानबुलस्थित आतातुर्क अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको आतंकवादी हमलामा परी ३६ जनाको मृत्यु भएको छ भने १४० बढी घाइते भएका छन् । तीनजना हमलावरले एकैसाथ टर्मिनल भवन प्रवेश गर्ने क्षेत्र नजिकै अन्धाधुन्द गोली प्रहार गर्न थालेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिनका लागि जवाफी कारवाही गर्दा आफैं बम बिस्फोट गराएका थिए ।
विभाजनको संघारमा बेलायत
असार १२, लन्डन । युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने निर्णयसँगै बेलायत आफैं विभाजित हुने अवस्थामा पुगेको छ। स्क्टल्यान्डकी फस्र्ट मिनिस्टर निकोला स्टरजियोले शुक्रबार बेलायती स्कटल्यान्डको स्वतन्त्रताका लागि एकपटक फेरि जनमत संग्रहतर्फ संकेत गरेपछि बेलायत विभाजित हुने अवस्था आएको हो। ५० लाख जनसंख्या रहेको स्कटल्यान्ड उक्त जनमत संग्रहमा युरोपियन युनियनमा रहिरहनुपर्ने पक्षमा बलियोसँग उभिएको थियो। स्कटल्यान्डका ६२ प्रतिशत बासिन्दाले बेलायतले युरोपियन युनियन छोड्न नहुने पक्षमा मतदान गरेका थिए।
को हुन विश्व विजेता सिकन्दर
असार १२, काठमाडौं । सिकन्दर महानलाई अंग्रेजीमा Alexander the great पनि भनिन्छ । उनको जन्म ईसा पूर्व ११ जून ३२३ मा मेसेडोनियामा भएको थियो । उनको पिताको नाम फिलीप र आमाको नाम आलंपिया हो । उनको विवाह रखसानासँग भएको थियो । २० वर्षको उमेर मै उनी मेसिडोनिया (ग्रिक) का राजा भएको थिए । उनलाई विश्व बिजेता र इतिहासमा सबैभन्दा कुशल सेनापतिका रुपमा समेत लिइन्छ । युवा अवस्थामै राजा भएपछि उनले आफ्नो पिताले पुरा गर्न नसकेको एसिया जित्ने महात्वकांक्षा देखे । त्यही महत्वकांक्षा सहित सिकन्दरले विशाल सेना निमार्ण मात्र गरेनन् सर्वोत्कृष्ट सैन्य र उपकरणहरुसहित उनी एसिया विजयका लागि निस्किए । उनले एसिया विजयसँगसँगै विश्व विजेता बन्ने सपना समेत पालेका थिए ।
पाकिस्तानमा विवाह पूर्वको सेक्सबाट मैले के सिके ?
असार ११ ,काठमाडौं । पाकिस्तानकी एक युवतीले लेखेको आलेखले यतिबेला विश्वभरी नै हंगामा गरेको छ । पाकिस्तानमा विवाह पूर्वको यौन सम्बन्धबारे उल्लेख गर्दै लेखेको लेखका कारण जारा हैदर नामकी ती युवती चर्चामा छिन् । ‘पाकिस्तानमा विवाह पूर्व सेक्सबाट मैले के सिकें’ शीर्षकमा लेखिएको उक्त लेख भि आइ सी नामक म्यागजिनमा प्रकाशित भएको थियो । पढ्नुहोस जाराको लेखको मुख्य अंश पाकिस्तान एक इस्लामिक र कट्टरपन्थी देश हो । तर पाकिस्तानमा पोर्न साइटहरु सबैभन्दा बढी हेरिने गरेको अनुसन्धानले देखाएका छन् । यसबाट नै यहाँको समाजबारे धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ । हुनत हरेक देशमा यौनको विषयमा कुरा गर्नु सहज मानिँदैन । पाकिस्तानमा यो कुरा झनै कठिन छ । विवाह पूर्ण यौन सम्बन्ध राखेको थाहा पाएमा पाकिस्तानमा केटीहरुलाई सरकारले नै सजाय तोकेको छ । केटीहरुको चरित्र मुख्य विषय भएपनि केटाहरुको चरित्रको कुरामा कुनै चासो दिइँदैन । यस्तो चलन पूर्व राष्ट्रपति जिया–उल हकको तानासाही ‘इस्लामिजेशन’को समय देखि चल्दै आएको छ । पाकिस्तानमा विवाह पूर्व यौन सम्बन्ध राख्ने केटीहरुलाई ढुंगाले हानेर समेत हत्या गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै कोर्रा लगाउने वा अनर किलिङ भनिने पारिवारिक हत्या समेत पाकिस्तानमा सामान्य विषय हुन् ।
मागेर भोजभतेर गर्नेले फूर्ति गर्न मिल्दैन
मागीमागी छोराको बिहे गर्दा जुन खालको परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ, ठीक यही ढंगको समस्या टानले वर्तमानमा बेहोरिरहेको छ । टानको क्रियाकलाप हेर्दा व्यवसायीको उत्थानभन्दा पनि एनजियो शैलीमा प्रचारमुखी र उत्तेजनामा टान नेतृत्व अगाडि बढिरहेको छ । अन्धाधुन्ध कार्यक्रम आयोजना गर्दै संस्थालाई आर्थिक घाटा लगाएर व्ययभार बढाउनु भएन । कुहिरोमा हराएको कागजस्तै टानले आफ्नो लक्ष्य र दिशा पहिचान गर्न नसक्दा ठूलो आर्थिक ऋणमा फस्न गएको अवस्था हो ।
वर्तमानमा व्यावसायिक संस्थाको बीचमा टानको गरिमा भन्दा बेइज्जत भएको छ । व्यवसायीको पीरमर्का र भावनालाई आत्मसाथ नगर्ने र कार्यसमितीभित्र छलफल नै नगर्ने प्रबृत्तिकै कारण आर्थिक भार थपिन गएको कुरामा शंका छैन । संस्थाको सफलतामा कार्यसमितिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएपनि टान नेतृत्वले यसलाई गम्भिरताका साथ नलिने र बेलाबखत कार्यसमितिभित्रको विरोध शान्त पार्न आंशिक बजेट परिचालन गर्ने स्थितिकै कारण ऋणको बोझ थपिदै गएको हो ।
उत्तेजनाकै स्वरुपमा केही दिनअघि सम्पन्न टान साधारणसभामा रु ३९ करोडको बजेट टिम्सबापतको रकम भन्दै पर्यटन बोर्डबाट ल्याउने घोषणा भयो । रकम आउनु त सकारात्मक कुरा हो । यद्यपि लेखासमितिले पर्यटन बोर्डलाई टानको आर्थिक हैसियत पारदर्शी नभएको भन्दै कुनै पनि कारोबार नगर्नु भनेको स्थितिमा टिम्सबापतको रकम तत्काल टानले प्राप्त गर्ने स्थीति देख्दिन ।
उत्तेजक योजना होइन, व्यावहारिक हुन सक्नुपर्यो । टान कर्मचारीलाई समयमा तलब खुवाउन नसक्नेले भारी उपदानको चर्चा छाड्नुपर्यो । ट्रेकिङ आफैँमा जोखिमको क्षेत्र हो , पर्वतीय पर्यटन यात्राका दौरान फेरी पनि हुदहुद आँधीजस्ता समस्या सामना गर्नु नपर्ला भन्ने हुँदैन, यस्तोमा वर्तमानको टानको छविले उद्धार तथा राहतको स्थिति सबल हुने सम्भावना एकदमै कम छ । सहयोगी संस्थाको सहयोग नरहन सक्छ । यसर्थ यस किसिमको जोखिमको पूर्व तयारीका लागि टान नेतृत्वले सामूहिक छलफल गरेर नयाँ भिजनका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ । टानको ऋण तिर्न हामी सक्षम छौ । टानको हालत सधँै यही अवस्थामा रहन रहने छैन, अप्ठेरोलाई समाधान गरेरै छाड्छौँ ।
यस्तो छ, पर्यटन व्यावसायीको दसैँ शैली
दसैँ मान्न यसपालि गृह जिल्ला धादिङ जाने तयारीमा छु । सप्तमीका दिन धादिङ घर पुग्ने कार्यक्रम छ । भूकम्पपछि पुर्ननिर्माण भएको पुर्खौली घरमा परिवारका सदस्यहरुमाझ यस वर्षको दसैँ मनाउने हाम्रो तयारी छ । तीन दाजुभाइमध्ये एक जना विदेशमा हुनुहुन्छ, हामी दुईजना दाजुभाइ, बुबा आमा र परिवारका अन्य सदस्य तथा छोराछोरी र भतिजभतिजीहरु सबै भेला हुँदा साँच्चै रमाइलो अनुभुति हुन्छ । परिवारको संख्या ठूलो भएको र परिवारमा सबैजसो मांसाहारी सदस्यहरु रहेकाले सदा झैँ यस वर्ष पनि ठूलो खसी काट्छौँ । मान्यजनको आर्शिवाद लिने र आफूभन्दा सानालाई टिका लगाइदिने, खानपिनमा परिवारका सदस्यहरुसँगै सहभागी हुन्छौँ ।
सानो छँदा गाँउमा रोटे पिङको चलन थियो । यद्यपि अहिले केही हराएजस्तो भएपनि केटाकेटीहरु त्यसमै झुम्मिएको देख्दा मन फुरङ्ग हुन्छ । दसैँ मान्न गाउँ जाने भएकाले यसपालि पर्यटकहरुलाई टिका लगाउने काम भने हुँदैन । सबै साथीहरुलाई बडादशैको शुभकामना भन्न चाहन्छु ।
राजेन्द्र सापकोटा, प्रबन्ध निर्देशक -मोजाइक एड्भेन्चर ट्रेकिङ
पर्यटनमन्त्रीलाई व्यवसायीको सुझाव ?
विदेशी एयरलाइन्सको अनुगमन आवश्यक
– आन्तरिक भ्रमण बर्ष २०७३ लाई सफल पार्न पर्यटन मन्त्रालयले तदारुकता देखाउन जरुरी छ ।
– विदेशी एयरलाईन्सको अनुगमन गर्नु जरुरी छ । सम्बन्धित एयरलाइन्सको जिडिएस सिस्टम सबैले नपाउने अवस्था छ, यसलाई सन्तुलित गर्नुप¥यो ।
– पर्यटन बोर्डमा कर्मचारीको संख्या बृद्धि गरिनु नितान्त आवश्यक छ । आवश्यक कर्मचारी अभावमा व्यवसायीको काम समयमै नभएको प्रति पर्यटन मन्त्रालयको ध्यान जाओस् । यसका साथै पुर्व मेची देखी पश्चिम महाकालीसम्मका पर्यटकीय संभावना बोकेका क्षेत्रलाई उजागर गर्न जरुरी छ ।
यम बहादुर खड्का, अध्यक्ष –सोसाइटी अफ ट्राभल एण्ड टुर्स अपरेटर्स
पर्यटन विकास गर्ने सरकारी योजना तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?
उत्साहित बनाउने कुरै छैन
समग्रमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो छ । पढ्दा र सुन्दा त लाग्छ नेपाल विकासको गतिमा कहाँ पुगेछ, तर विडम्बना हेर्नुहोला सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम कार्यन्वयन नै हुँदैन । यसले गर्दा मलाई यो नीति तथा कार्यक्रम आएकोमा खासै उत्साह छैन ।
योजना बनाउनु राम्रो हो । त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने दृढता पनि देखाउनुपर्छ । जस्तो उदाहरणका लागि सरकारले २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका विषयमा ध्याए दिए जस्तो मलाई लाग्दैन । ०१८ मा होइन ०१९ मा मनाऊ तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरेर । अहिले सबै खालका पर्यटकीय गतिविधिहरु डामाडोल छन् । त्यसले यस्तो परिस्थितिबाट कसरी उकास्ने भन्ने तर्फ हामीले सोच्नुपथ्र्यो । हाम्रो कार्यक्रम र योजनाहरु त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । महत्वकांक्षी योजनामात्र बनाएर हुँदैन । अहिले हेर्नुुुस् आएका पर्यटकलाई त राम्रो सेवा दिन सकेका छैनौं उनीहरुलाई सुरक्षित महशुस गराउन सकेका छैनौं भने टाउको गनेर मात्र के हुन्छ । त्यसकारण पर्यटक विकास गर्ने हो भने धेरै महत्वकांक्षी योजना मात्र बुन्ने होइन, पाहुनालाई बोलाएर कसरी राम्रो सत्कार गर्ने भन्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्छ ।
एकराज अधिकारी, (सचिव –रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएशन)
वैशाख १२ लाई कसरी लिएका छन् पर्यटन व्यवसायीले ?
अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यलाई नेपाल झिकाउ
बैशाख १२ को भूकम्पले हामीलाई विनाश गर्‍यो र त्यहीअनुसार हामीले पुर्ननिर्माणको काम पनि थालनी गर्‍यौ । त्यसकारण यो दिनलाई हामीले विनाशपछिको विकासको रुपमा मनाउनुपर्छ । जसले गर्दा बैशाख १२ को सन्देश नेपाल सुरक्षित छ र विकासको गतिमा अगाडि बढ्दैछ भन्ने पनि हो ।
अहिले भूकम्पपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्री केही रुपमा खस्किएको छ । जसलाई माथि उठाउनु पनि आजको आवश्यकता हो । त्यसकारण पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको प्रचार प्रसारनै हो । नेपाल सुरक्षित छ भन्ने सन्देश प्रवाह गनुपर्छ । जसका लागि नेपालका साथसाथै अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमलाईसमेत नेपाल ल्याएर नेपालको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नयाँ सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ । नेपालबारे समाचार संकलनका लागि सरकारले बीबीसी, सीएनएन जस्ता संचार माध्यमका प्रतिनिधिलाई नेपाल बोलाई दियोस् हामी व्यवसायीले उनीहरुलाई भ्रमण र अन्य व्यवस्थापनको जिम्मा लिन तयार छौ । अर्को कुरा बैशाख १२ गतेको दिन हामीले यो एक वर्षमा पुनः निर्माण गरेको एउटा स्थानमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरि पुनःनिर्माणमा हामीले गरेको कामको उदाहरण सबैमाझ प्रस्ततु गर्नुपर्छ । जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय साथ र सहयोग सदैव रहिरहोस् ।
मोहन लम्साल, प्रबन्धनिर्देशक –मकालु एड्भेञ्चर
नेपाल पर्यटन बोर्डका नवनियुक्त सिइओलाई व्यवसायीहरुको सुझावः
सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुस्
चार वर्षपछि नेपाल पर्यटन बोर्डले सीईओ पाएको छ । पर्यटनका लागि यो पक्कै पनि खुसीको कुरा हो । मुलुकको पर्यटन क्षेत्र गम्भिर मोडमा पुगेको बेला बोर्डले नेतृत्व पाउनुले आशाको सञ्चार गरेको छ ।
पर्यटन बोर्ड आफैँ ‘प्यारालाईज्ड’ भएको छ, राम्रोसँग कार्यसम्पादन भइरहेको छैन । विगतको कुराहरुबाट पाठ सिकेर बोर्डले अब आफ्ना गतिविधिहरु दु्रतगतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ । नयाँ नेतृत्व आएपछि बोर्डको संरचनागत सुधार होला भन्ने अपेक्षा छ । विगतमा पर्यटन बोर्ड र टानबीच पदयात्री सूचना व्यवस्थापनलगायत ‘इस्यू’हरुमा विभिन्न सम्झौताहरु भएका थिए । अब बोर्डले ध्यान दिनु जरुरी छ । पहिले आधिकारीक व्यक्ति नहुँदा समस्या थियो । अब त्यो अवस्था छैन ।
समस्याहरु समाधान होलान्, अब ती सम्झौताहरु कार्यान्वयन होलान् भन्ने आशा छ । निजी क्षेत्र र बोर्डको सम्बन्ध पनि अब सुमधुर होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्वनका कामले पनि गति पाउलान् ।
कर्ण लामा, महासचिव -ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसियसन अफ नेपाल (टान)
पर्यटन क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या र अबको बाटो ?
विकल्प खोजेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ
नाकाबन्दीका कारण अहिले इन्धनलगायत अन्य अत्यावश्यक बस्तुको चरम अभाव छ । जसकारण देशका हर क्षेत्र प्रभावित भएको छ । यसको प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा अझ गम्भिर रुपमा परेको छ । अहिले नेपाल भ्रमणमा रहेका पर्यटकहरुले आफ्नो भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किएका छन् भने नेपाल आउने तरखरमा रहेकाहरु पनि भ्रमण रद्ध गरेर बसेका छन् ।
पर्यटन जस्तो निकै संवेदनशिल र निकै महत्वपूर्ण यो क्षेत्रलाई यस्तो अभावका बेला राज्यले विशेष क्षेत्र तोकेर केही सहयोग गर्नुपथ्र्यो तर त्यो भएको छैन । भूकम्पपछि केही खस्किएको पर्यटनलाई माथि उकास्न हामीले नेपाल सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन स्वदेश तथा विदेशमा प्रचारप्रसार पनि ग¥यौ । त्यसपछि हामीलाई केही आशा पनि पलाएको थियो तर अहिले विदेशीलाई नेपाल आउ भनेर भन्ने अवस्था समेत छैन । तथापी नाकाबन्दीको समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल वार्ता र छलफलको बाटो अलम्बन गर्नुपर्छ ।
कमल सापकोटा प्रबन्ध निर्देशक : माउन्टेन डिलाइट्स ट्रेक्किङ
आगामी टान निर्वाचन बारेमा यसो भन्छन् व्यवसायी
टानमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ
टानले अहिले जे गरिरहेको छ, यो जिम्मेवारीपूर्ण कुरा भएन । आफ्नो मार्गबाट टान च्यूत भएको अवस्था देखिएको छ । विगतको अभ्यासअनुसार सेप्टेम्रबमै चुनाव सम्पन्न गर्नपर्ने हो । तर, यसका लागि तयारीका हिसावले शून्य देखिएको छ । अन्तिम घडीसम्म पनि निर्वाचनका लागि मिति घोषणा नगर्नुले टानमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
टानको खर्च गर्ने प्रणाली पनि गलत छ । आफुलाई मन लागेको शिर्षक र क्षेत्रमा बजेट लैजाने, खर्च गर्ने परिपाटी छ । शिर्षस्त नेतृत्व र कार्यप्रणालीमा थुप्रै समस्याहरु देखिन्छ ।
हालसम्म निर्वाचनका लागि मिति तय गरिएको छैन् । अहिलेसम्म मिति घोषणा नगर्नुले सेप्टेम्बरमा चुनाव हुने सम्भावना टेरेको छ । अव डिसेम्बर वा यसको आसपासमा चुनाव होला । सेप्टेम्बरमै चुनाव गर्नका लागि हामी सचेत व्यवसायीहरु एक भएर नेतृत्वलाई दवाव दिनु जरुरी छ ।
शेखर बहादुर थापा, प्रबन्धनिर्देशक -अलपाईन एसियन ट्रेक्स एण्ड एक्स्पेडिसन
पर्यटनमा बजे‌ट ?
बजे‌टले‌ खासै‌ उत्साह दिन सके‌न आर्थिक वर्ष २०७२०७३ को‌ बजे‌टमा सर‌कार‌ले‌ पर्यटन क्षे‌त्रको‌ प्रवद्र्धन र‌ विकासका लागि खासै‌ उत्साहजनक रुपमा कार्यक्रम र‌ बजे‌ट छुट्याएको‌ दे‌खिँदै‌न । सर‌कार‌को‌ कार्यक्रम र‌ बजे‌ट अध्ययन गर्दा तीन÷चार‌वटा महत्वपूर्ण कुर‌ामा ध्यान नदिएको‌ दे‌खिन्छ । पहिलो‌ कुर‌ा पर्वतीय पर्यटनलाई पुनरुत्थान यो‌जनाअन्तर्गत र‌ाखे‌र‌ पुनर्निर्माण गर्नुपथ्योर्‌, त्यो‌ कुर‌ा आएन । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पर्वतीय पर्यटनका रुटहरु र‌ प्रभावित क्षे‌त्रहरुको‌ पुनरुत्थानका लागि बजे‌ट विनियो‌जन भएको‌ पाइएन । साहसिक र‌ पर्वतीय पर्यटनको‌ पुनरुत्थानका लागि संसद्को‌ विकास समितिले‌ पर्यटन विकासका लागि सिफारि‌स गर‌े‌को‌ कुर‌ालाई समे‌त बजे‌टले‌ छो‌एको‌ छै‌न । अकोर्‌ कुर‌ा भूकम्पबाट प्रभावित पर्यटन क्षे‌त्रमा आबद्ध दुई लाख मजदुर‌ विस्थापित भएको‌ अवस्था छ । ठूलो‌ संख्याका मजदुर‌हरुलाई सम्बो‌धन गनेर्‌गर‌ी बजे‌ट छुट्याउनुपथ्योर्‌ त्यो‌ पनि छै‌न । त्यस्तै‌ पर्यटन क्षे‌त्रमा आबद्ध व्यवसायी र‌ लगानीकर्ताहरुलाई न्यूनतम ब्याजदर‌मा ऋण उपलब्ध गर‌ाउने‌ कुर‌ामा बजे‌ट मौ‌न छ । उपल्लो‌ मुस्ताङलगायतका क्षे‌त्रमा र‌ो‌यल्टी छुट्याउन सर‌कार‌ले‌ पहल गर‌े‌न । र‌ाज्यले‌ अर्थतन्त्रको‌ महत्वपूर्ण हिस्सा बो‌के‌को‌ पर्यटनलाई नजर‌अन्दाज गर‌े‌को‌ प्रष्ट छ । तर‌ यो‌ क्षे‌त्रलाई जति प्राथमिकता दिनुपथ्योर्‌ त्यो‌ पाइँदै‌न । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षे‌त्रमा संवे‌दनशील दे‌खिए पनि पर्यटनलाई स्थान दिएन । समग्रमा बजे‌टबाट हामी उत्साहित हुने‌ अवस्था छै‌न ।
र‌मे‌श धमला, अध्यक्ष -टान
पर्यटन र‌ाजनीति मुक्त हुनुपर्छ